မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: 2008 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ညီညွတ်ကြရန် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီး သတိပေး
NEJ/ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈
ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုကြည့်လျှင် မိမိ မြန်မာနိုင်ငံထွက် မုန့်ပြားသလက်လေးကိုပင် ညီညီညွတ်ညွတ် တစားပွဲတည်းထိုင်ပြီး အတူမစားနိုင်သည့်အဖြစ် ရောက်နေသည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းသည်ဟု သက်တော် (၉၀) ကျော် မန္တလေးမြို့ ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးအဂ္ဂိယက ခေတ်ပြိုင်သို့ အမိန့်ရှိသည်။
မြန်မာပြည်သူများအတွက် ၂၀၀၉ နှစ်ဆန်း သြ၀ါဒကထာမြွက်ကြားပါရန် ခေတ်ပြိုင်မှ လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးအဂ္ဂိယက ယခုကဲ့သိ်ု့ မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ပရိတ်ကြီးနိဒါန်းလာ သမဂ္ဂါ ဆိုသည့်အတိုင်း ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိကြရန် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ယင်းသို့
ညီညွတ်ရေး ဆုံးမခြင်းကိုပင် အချို့က နိုင်ငံရေးလုပ်သည်ဟု ဆရာတော်ကြီးအပေါ် အထင်မှားနေကြောင်းကိုလည်း ယခုကဲ့သို့ မိန့်ကြားသည်။
“ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးကတော့ မန္တလေးမှာ တခါတခါ ပြောပါတယ်။ တို့က ညီညွတ်ရေးပြောဟော မင်းတို့ အဲဒါ နိုင်ငံရေးထင်နေ ခက်တယ်ကွလို့။ ဘယ်သူ့ရယ်လို့မဟုတ်ဘူး အဲဒါတွေ တခါတခါ ထည့်ပြောဖူးတယ်။ ညီညွတ်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် လူထွက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်မှာပေါ့ကွလို့။ ရုံးတွေဘာတွေ ထိုင်ရအောင် လုပ်မှာပေါ့ကွလို့။ လူထွက်ပြီးတော့လည်း နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးလို့။ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်တာမှုတ်ဘူး။ ညီညွတ်ရေးပြောတာကွလို့။ ညီညွတ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကွဲပြားဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့။ အမေအဖေနဲ့ သားသမီးတည့်အောင်ပြောနေတာ မင်္ဂလာတရားနဲ့ နိုင်ငံရေးတရားနဲ့ မတူဘူးကွလို့။ တို့ကတော့ ဘယ်ပါတီ ကောင်းစားပါစေ၊ ဘယ်သူကတော့ တက်ပါစေ၊ ဘယ်သူက ထိပ်တန်းကျပါစေ။ တို့ကတော့ မျှတတယ်ကွလို့” ဟု ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားသည်။
သို့သော် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ ယခုထိ ညီညွတ်ပုံမရဟု ဆရာတော်ကြီးက ယူဆသည်။ စားပွဲထိုင်ပြီး မဆွေးနွေးနိုင်ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ရည်ညွှန်းပြီး “အကုန်လုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ စားပွဲကြီးတခုပေါ်မှာ နှစ်ဘက်က တက်ရင် ဟိုဘက် (၄) ယောက် ဒီဘက်က (၄) ယောက် လက်ဖက်ရည်သောက်နေတာ၊ ပေါင်မုန့်အတူစားနေတာ တို့က ကြိုက်တာပါ။ မုန့်ပြားသလက် အတူတူစားနေတာ ကြိုက်တာပါ။ ခုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကထွက်တဲ့ မုန့်ပြားသလက်လေးကို လူ (၈) ယောက် (၉) ယောက် ၀ိုင်းမစားနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်နေရတာ အဲဒါဝမ်းနည်းတာပါကွလို့။ ကိုယ့်နိုင်ငံကထွက်တဲ့ မုန့်ပြားသလက်လေးကို စားကြည့်စမ်းပါ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့။ အချင်းချင်းကွာ” ဟု ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ချုပ် ဆရာတော်ကြီးက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
မန္တလေးမြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှ လိုင်စင်မဲ့ကားများ သိမ်းသည့်အချိန်တွင် ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးအဂ္ဂိယကျောင်းမှ ကားများကိုလည်း စစ်အစိုးရ သိမ်းယူထားရာ ယခုထိ ပြန်မပေးသေးကြောင်း ဆရာတော်က အမိန့်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားရေဒီယိုအချို့နှင့် ဆရာတော်ကြီး တချိန်က မေးမြန်းလျှောက်ထားချက်အချို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရကို ပုတ်ခတ်သည်ဟု အစွပ်စွဲခံရမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း “မင်းကို တို့က ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူး။ အစိုးရကို ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အစိုးရကို တို့က မြှင့်တင်တာပါ။ အစိုးရကို တို့က ဂုဏ်ပြုတာ။ ကံနဲ့တောင်တူတဲ့မင်း။ မင်းနဲ့တူတဲ့ကံ။ ကံမင်းပြုက ခံရရှာသည်။ အဲတော့ ကံက မင်းနဲ့တူလိုက်၊ ဆရာနဲ့တူလိုက်၊ အဖေနဲ့တူလိုက်၊ အမေနဲ့တူလိုက်၊ ဘာနဲ့တူလိုက်၊ ညာနဲ့တူလိုက်နဲ့။ ဒီလိုဆိုရင် ကံက ဘယ်ကစဖြစ်တာလဲ။ ကံဘယ်က စပေါ်တာလဲ။ ကံမင်းပြုတာ ခံရရှာသည်။ ကံဟာ ဘယ်ကဖြစ်ကုန်ကြဟု တွေးဆသောခါ ကံဖြစ်ရာသည် ကိုယ်သာပြုသည့်အမှုတည်း--တဲ့” ဟု ဆရာတော်က ရှင်းပြသည်။
(ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးအဂ္ဂိယနှင့် ခေတ်ပြိုင် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးစိန်ကျော်လှိုင် လျှောက်ထားမေးမြန်းချက် အပြည့်အစုံ)
Posted by Kaw Mu Doh at 3:22 PM0comments
အချိန်မရှိတော့ဘူး လုပ်လိုက်ပါတော့တဲ့ ကျော်ဟိန်းကပြောတယ်
Posted by အာဇာနည် at 1:43 PM0comments
နာဂိုယာမြို့ (ဂျပန်နိုင်ငံ) ဒီမိုကရေစီအရေး တောင်းဆိုချီတက်ပွဲများနှင့် ဆန္ဒပြပွဲ (၂၀၀၈)မှတ်တမ်း
Posted by အာဇာနည် at 12:13 PM0comments
ဒုတိယမြောက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ နှင့် အနီးကပ်ဆုံးရန်သူ
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့တွင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အသက် စွန့် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်၊ အမိမြန်မာပြည် တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ကာ၊ လွတ်လပ်၍ အချုပ် အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်၊ ဝင့်ကြွားစွာရပ်တည်နှိုင်ခဲ့သည်။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် နှင့် ပြည် သူတို့ အတူတကွ လက်တွဲကာ၊ တပ်မတော်ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း၊ အနီး ကပ် ဆုံးရန်သူ ဖြစ်သည့် ဖက်စစ်တို့အားတွန်းလှန်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်၊ နယ်ချဲ့တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေး ကို ညီညွတ်စွာရ ယူနိုင်ခဲ့သည်။
လာမည့် ၂၀၀၉ ခု၊ ဇန္နဝါရီ(၄)ရက်ဆိုလျှင်၊ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်မှာ(၆၁)နှစ်ပြည့် မြောက် တော့ မည်ဖြစ်သည်။ (၆၁)နှစ်အတွင်း အမိမြန်မာပြည်မှာပြည်သူအများစုကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အရယူပေးခဲ့သည့် လွတ် လပ်ရေး ၏ အနှစ်သာရ ကို အမှန်တကယ် ရရှိခံစားခဲ့ကြရပါရဲ့လား ? . .
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီး၊ တပ်မတော်သည်၊ ဖက်ဆစ်အမွေဆိုးကိုအရယူခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်ဆိုး ၏ လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပြီးနောက်၊ "ပြည်သူနှင့်အတူ တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝမှ လွတ်လပ်ရေး အရယူပေး ခဲ့သည့် တပ်မတော်ဘဝ" မှ " ပြည်သူအခြင်းခြင်း ကျွန်ပြုသည့်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး ၏ လက်ကိုင် တုတ် တပ်ဘဝ " သို့ ရောက်ခဲ့ရသည်ကို၊ အနှစ်(၆၀)သမိုင်းက အထင်အရှား သက်သေပြနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတိုင်းရင်းသား၊ ညီအစ်ကိုခြင်းပြဿနာကို၊ လက်နက်အားကိုး အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး၏ ဖြေရှင်းမှုမျိုးဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ ကြသဖြင့်၊ ပြည်တွင်းစစ်မီး ဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့ရပြီး၊ ၎င်းဒါဏ်ကို ပြည်သူတရပ်လုံး ခါးဆီး ခံခဲ့ရသည်မှာ ယနေ့ထိတိုင်ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည် မွဲပြာကျခဲ့ရပြီး၊ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အောက် တန်းနောက်တန်းကျခဲ့ရသည်။ အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သည့် တပ်မတော် သည်လည်း၊ တိုင်းရင်းသား၊ ပြည်သူ ကိုဖိနှိပ်သည့် လက်ကိုင်တုတ် ယန္တရားအဖြစ် ရောက်ခဲ့ရပြီး၊ လူထု၏ အော့နှလုံးနာမှုကိုခံခဲ့ရ၊ ခံနေရဆဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဖက်ဆစ်အမွေဆိုးကိုဆက်ခံခဲ့သည့်အာဏာရှင်၏၊ လက်ဝေခံစစ်အာဏာရူးတစု၏ နဖါးကြိုးထိုး ထားခြင်းခံနေရပြီး၊ တပ်မတော်တွင်းရှိ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သား အဆင့်ဆင့်တိုင်းသည်၊ မိမိတို့ ၏အရာရှိကိုသာမကတော့ပဲ၊ အရာရှိ၏ မိန်းမ၊ သားသမီး၊ ယောက္ခမ အဆုံး၊ ကြေး ကျွန်များသဖွယ်ဆက်ဆံခံရ၊ လုပ်ကျွေးပြုစုပေးနေကြရသည် ကို၊ တပ်မတော်သားတိုင်းသိလာကြပြီဖြစ်သည်။ မိမိပြည်သူခြင်း အိုးမဲ သုတ်သတ်ဖြတ်ခိုင်းထားခြင်း၊ အနှစ်သာရမဲ့ စစ်ပွဲများ ဖန်တည်းပေးထားခြင်းဖြင့်၊ တပ်မ တော်သားအားလုံးကို မအားရအောင်၊ မလိုအပ်ပဲအသက်စွန့်ခိုင်းထား ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏အာဏာကို ကြီးထွားသထက်ကြီးထွားအောင် တည်ဆောက်ထားခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသား၊ညီအ ကိုများနေထိုင်ရာ နယ်စပ်ဒေသများတွင်လည်း၊ စစ်ပွဲ များကြားတွင် မတရားမှုပေါင်းများစွာကို အစွမ်းကုန်ကျူး လွန်စေသောနည်းဖြင့် ရပ်တည်ခိုင်းခံထားရပြီး၊ ၎င်း၏ အကျိုးဆက်အဖြစ်၊ တပ်မတော်တခုလုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခာမှာ၊ ကမ္မာ့အလည်တွင် အဖတ် မဆည် နှိုင် အောင်ကျဆင်းစေခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီ(၄)ရက် . . ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ တပ်မတော်သည်၊ ပြည်သူတရပ်လုံး နှင့် လက်တွဲ၍၊ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူပေးခဲ့သည်မှာ၊ (၆၁)နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ အာဏာရှင်၏အစေအခိုင်းခံနေရသည့်တပ်မတော် ဘယ်လိုဆက်ရပ်တည်ကြမည်နည်း?
ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအနေနှင့်၊ အာဏာရှင်တစု၏ မတရားပြုကျင့် အုပ်စိုးထားမှုမှလွတ်မြောက်ဖို့ရာ၊ နည်းမျိုးစုံ ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ကြ၊ ကြိုးစားနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် ဒီကနေ့မျိုးဆက်တို့ ပေးဆပ်နေကြရသည်။ ဘုရားသားတော် သံဃာတော်များ လူမဆန်စွာ နှိပ်ကွပ် ခံနေကြရသည် . .
အားလုံးမှာ . . . လက်တဆုပ်စာ အာဏာရှင်တို့်၊ မတရားရယူထားသည့် အခွင့်အရေးများလက်မလွှတ်ရရေး တခုတည်းအတွက်သာ၊ စစ်တပ်တခုလုံးမှာအသုံးချခံ အကာအကွယ်ပေးထားခဲ့ရသည်။ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူ တရပ်လုံးမှာ၊ စားရာမဲ့သောက် ရာမဲ့၊ အနာဂတ်မဲ့၊ နင်းပြား ဘဝများ ဖြစ်နေကြရသည်။ . . . .
ထိုဘဝများစွာထဲတွင်၊ . . . ဒီကနေ့ တပ်မတော်သားအများစု၏ မိဘများ၊ ဇနီးမယား၊ သားသမီးများလည်း အပါ အဝင်ဖြစ်နေကြရသည်။ တပ်မတော်သားများ၏ မိဘ၊ ဇနီး၊ သားသမီးများသည်လည်း ပြည်သူထဲမှ ပြည်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်ထပ်တူခံစားနေကြရသူများသာဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်အတူလွတ်လပ်ရေးကို လိုလားနေကြသူများဖြစ်ကြသည်။
လက်တဆုပ်စာအာဏာရူး စစ်ခေါင်းဆောင်တစု၏ . . မိမိတို့နှင့် မိမိတို့ကိုသစ္စာခံသူ က္မျန်တစုသာ ကောင်း စားရေး အတွက်၊ အများစုကို စစ်က္မျန်ပြုထားသည့် စနစ်ဆိုးကြီးမှ ရုန်းထွက်သည့် "ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ" တွင်၊ ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်အတူ ပူပေါင်း ပါဝင်ကြခြင်းဖြင့်၊ . .တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို အချိန်မှီ ကယ်တင်ကြရ မည့်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် . . " မျိုးချစ်တပ်မတော်သားအပေါင်းတို့အနေနှင့် . . လာမည့် ဇန္နဝါရီ (၄) ရက် နေ့ကစလို့ . . . သင်တို့နှင့် အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို စတင်ရှာဖွေ တော်လှန်ကြခြင်းဖြင့်၊ ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီး မှာ၊ ပြည်သူလူထုကြီး နဲ့အတူပူးပေါင်းကာ၊ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကို၊ အမိမြေမှ အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားကြပါစို့ ဟု . . (၆၁)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယမှာ . . . လေးနက်စွာတိုက်တွန်း ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် . . .
ကိုရင်အေး ( မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ) ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ . . . .
Posted by အာဇာနည် at 12:01 PM0comments
လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာ အကျဉ်းသား ၁၀၅ ဦး ကော့ဘဇားထောင်တွင် အိမ်ပြန်ခွင့်မရဘဲ ၂ နှစ်ကျော်ကြာ
မောင်သစ်အောင် (နိရဉ္စရာ) လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာ့ အကျဉ်းသား ၁၀၅ ဦးမှာ မြန်မာ့ စစ်အစိုးရမှ လက်မခံသဖြင့် အိမ်မပြန်နိုင်ဘဲ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ကော့ဘဇား ထောင်တွင် နေထိုင် နေရသည်မှာ ၂ နှစ်ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အကျဉ်းသား ၁၀၅ ဦးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ရန် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် အနီးတွင်
တည်ရှိသော ကော့ဘဇားထောင်သို့ ဘင်္ဂလာ အစိုးရမှ ပို့ဆောင်ထားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ လက်ခံရန် ငြင်းပယ်သဖြင့် ယခုအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဖြစ်နေဟု ထောင်အာဏာပိုင် တဦးက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ထောင်သားများ အတွက် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်မှ နှစ်စဉ် အပို ကုန်ကျခံနေရပြီး ထောင်ထဲတွင်လည်း နေရာထိုင်ခင်း မလုံလောက်သဖြင့် မြန်မာ ထောင်သားများကို နေရပ် တိုင်းပြည်သို့ အမြန်ဆုံး ပြန်ပို့ရန် လိုလားနေသည်ဟု သိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ကော့စ်ဘဇားမြို့ထောင်တွင် မြန်နိုင်ငံမှ ထောင်သား ၄၀၀ နီးပါး ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် လွတ်ရက် စေ့နေသူ ထောင်သား ၁၀၅ ဦး ရှိနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ထောင်သားများမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံတွင် ပြစ်မူမျိုးစုံနှင့် အဖမ်းခံနေရပြီး အများစုမှာ တရားမ၀င် ခိုးဝင်မူကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ထောင်သား အရေအတွက်မှာ ယခုအခါ တဖန် ပြန်တိုးပွားလာပြီး ဦးရေ ၁၅၀၀ ထိရှိလာကြောင်း ထောင်သတင်း ရပ်ကွက်အရ သိရသည်။
လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ပြန်ပို့လိုကြောင်း ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်များက ဆက်သွယ်တိုင်း မောင်တော လ၀ကနှင့် စစ်အာဏာပိုင်များက စစ်ဆေးရန် လိုသေးကြောင်း ပြောပြီး လက်ခံရန် အမြဲငြင်းဆိုလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 12:01 PM0comments
ပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးတဲ့ ခွေးသူတောင်းစား စစ်အစိုးရ
အိန္ဒိယ ရေနံ ကုမ္ပဏီ Essar ကစစ်တွေမြို့နယ်တွင် လယ်သိမ်းပြီး ရေနံ တူးရန် စတင်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ရေနံရှာဖွေခွင့်ရထားသော အိန္ဒိယ ရေနံ ကုမ္ပဏီ Essar သည် ယခုလ ပထမ အပတ်မှ စတင်ပြီး စစ်တွေမြို့နယ် စပါးထားကျေးရွာ အနီးတွင် ရေနံ စတင်တူးဖေါ်ရန် စီစဉ် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရသည်။
ဒေသခံ တဦးက “သူတို့က အခု လမ်းတွေ ဖေါက်နေတယ်။ အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်နေတယ်။ သင်္ဘောတွေ ဆိပ်ကပ်ဖို့
ဆိပ်ခံ တံတား တခု ဆောက်နေတယ်။ ဒါတွေ ပီးရင် သူတို့ ရေနံ စတင် တူးပါလိမ့်မယ်။” ဟု ပြောသည်။
ရေနံတူးဖေါ်မည့် နေရာတွင် မြေတူးစက်များ၊ လမ်းလုပ်သည့် ထရပ်ကားများ ရောက်ရှိနေပြီး အိန္ဒိယမှ အင်ဂျင်နီယာများလည်း ရောက်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
အိန္ဒိယမှ အင်ဂျင်နီယာများမှာ စစ်တွေ နိုဗို တည်းခိုရိပ်သာတွင် တည်းခိုနေပြီး ထိုမှ တဆင့် စက်လှေဖြင့် အသွားအပြန် လုပ်ကာ အဆိုပါ စီမံကိန်းအား စတင် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင် နေသည်ဟု အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
ယခုအိန္ဒိယ ရေနံ ကုမ္ပဏီမှ ရေနံတူးဖေါ်မည့် နေရာမှာ စပါထားကျေးရွာနှင့် တဘက်တကမ်းတွင် တည်ရှိသော “ညိုရောင်ချောင်း” ကျေးရွာ အနီးတွင် ဖြစ်သည်။
ယခု ရေနံတူးဖေါ်မည့် နေရာမှာ ညိုရောင်ချောင်းကျေးရွာမှ လယ်သမားများပိုင်သော လယ်မြေတွင် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
လယ်မြေမှာ ၂၀ ဧက နီးပါးခန့်ရှိပြီး ဒေသခံ လယ်သမား ၁၀ ဦးခန့်က ပိုင်ဆိုင်သော လယ်မြေများ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ကတည်းက စစ်အာဏာပိုင်များက ရေနံတူးရန် အဆိုပါ လယ်ဧက ၂၀ ကို သိမ်းထားခဲ့သည်။
“အစပိုင်းကတော့ လျော်ကြေးပေးမယ်ဆိုပီး ပြောပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လျော်ကြေးလည်း မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အထက်အာဏာပိုင်တွေကိ်ု လျော်ကြေးရဖို့ တိုင်တန်းထားပါတယ်။” ဟု အဆိုပါ ဒေသခံ ပြောသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 11:58 AM0comments
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၀၈ သတင်းများ
Posted by အာဇာနည် at 6:30 AM0comments
Posted by အာဇာနည် at 6:26 AM0comments
FREE DAW AUNG SAN SU KYI RANGOON NEWS
Posted by အာဇာနည် at 6:24 AM0comments
New Virus.. Becareful
Anyone-using Internet mail such as Yahoo, Hotmail, AOL and so on.
This information arrived this morning, Direct from both Microsoft and Norton
Please send it to everybody you know who has Access to the Internet.
You may receivean apparently harmless e-mail titled
'Mail Server Report'
If you open either file,amessage will appear on your screen
'It is too late now, your life is no longer beautiful.'
Subsequently you will LOSE EVERYTHING IN YOUR PC, And the person who sent it to you will gain access to your Name, e-mail and password.
This isanew virus which started to circulate on Saturday Afternoon.
AOL has already confirmed the severity, and the anti virus software is not capable of destroying it.
The virus has been created byahacker who calls himself 'life owner'.
THIS HAS BEEN CONFIRMED BY SNOPES.
Posted by အာဇာနည် at 6:17 AM0comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များရဲ့ အနာဂတ်
Noon Johan ဟာ အ၀တ်ချုပ်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ သူမရဲ့သားသမီး ခုနှစ်ယောက်ကို ကျွေးမွေး နိုင်ပါပြီ။ ဒါဟာအိမ်မက်လား လို့လည်း သူမကထင်နေဆဲပါပဲ။ သူမခင်ပွန်း ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းသစ်က သူမကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒီသင်တန်းသာ မတက်ခဲ့ရရင် ကျမမိသားစု အတွက် တောထဲမှာ ထင်းခုတ်ပြီး ရောင်းကျွေးရမလား၊ တောင်းရမ်းကျွေးရမလားပါပဲ။
သင်တန်းမတက်ရရင် ဒါတွေလုပ်ဘို့တခုပဲ ရွေးချယ်စရာရှိပါတော့တယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးလာပြီးတဲ့နောက် လူသားခြင်းဆိုင်ရာ စာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့တွေ ဝေငှပေးကမ်းတာကို စားသောက်နေထိုင်နေခဲ့ကြရတာ ခုချိန်မှာတော့ ဒါတွေမလိုတော့ပါဘူး။ သူမတို့မိသားစုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းနှစ်ခုထဲမှာ ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်ထဲမှာ အပါ အ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တတွေဟာ မကြာတော့တဲ့တနေ့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့် ချက်လေးတွေနဲ့ နေထိုင်နေကြတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးများရုံး (UNHCR) က သူတို့ရဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀အခြေအနေတွေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေနိုင်ဘို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိမဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်စေမဲ့ သေးငယ်ပေမဲ့ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ကံတရားမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ မေ့ပျောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
အားလုံးသိပါတယ်လေ ကျနော်တို့ရဲ့ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ သူတို့ဒီမှာ နေထိုင်နေ ကြတာ (၁၇) နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်က သူတို့တွေဟာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ တခု ထဲအပေါ်မှာပဲ မှီခိုနေကြရတာပါ။ အရင်က သူတို့မှ ဘာအခွင့်အလမ်းမှ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ အခု အချိန်မှာတော့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးပြီး ဘ၀ ရပ်တည်နိုင်ဘို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဘို့ အရည်အသွေးတွေရှိလာပြီလို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါ တယ်။
အပြောင်းအလဲတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်း တွေမှာပါ ရှိနေတာပါ။ ဆိုလာ (solar) စံနစ်နဲ့ လျှပ်စစ်သုံးစွဲတာတွေ၊ အိမ်သာနဲ့ နေအိမ် တွေ ဆောက်လုပ်တာတွေက လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ တွေ့မြင် လာရပါတယ်။
ကျနော့်မှာ အရည်အခြင်းနည်းနည်းရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီအရည်အချင်းကို အသုံးချပြီး မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာပါ။ အနာဂတ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀တွေ ရလာမှာပါ။
Noor Jahan ဟာ ဒုက္ခသည်တွေ အများစုထဲမှာ တက်ကြွမှုရှိတဲ့ သူတယောက်ဖြစ် ပါတယ်၊ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု နဲ့ စောစီးစွာ အိမ် ထောင်ပြုမှုတွေကြောင့် ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တန်း တွေ ပေး နေသူ တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေ တိုးတက်လာနိုင်ဘို့အတွက် ပညာပေးမှု လုပ်ငန်းတွေအပြင် အသင်း အဖွဲ့အားကစားနည်းတွေကိုလည်း စခန်းအတွင်းမှာ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်မှုအဓိပ္ပါယ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အဖြေတွေထွက်လာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း သူတို့သင်ကြား နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အားကစား နဲ့ တခြားတိုးတက်မှုတွေ ရှိလာပေမဲ့ ပညာရေးအခြေအနေကတော့ အရည်အခြင်းမပြည့်ဝသေးပါဘူး။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက စာသင်ကျောင်းတွေမှာ သုံးဘာသာပဲ သင်ကြားမှုရှိပြီး အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ကြားနိုင်ခွင့်တွေလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒီအတွက် Noor Jahan ကတော့ သူမရဲ့ ခလေးငယ်တွေအဖို့ အကန့်အသတ် နဲ့ နေထိုင်နေကြရတာမို့ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျမ အဓိက စိုးရိမ်ပူပန်မိတာက ကျမတို့ အပြင်ကို အလုပ်ထွက်မလုပ်နိုင်၊ ခလေးတွေ ကိုလည်း အပြင်မှာ ကျောင်း မပို့နိုင်ပဲ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ သင်ပေးတဲ့ ပညာရေးပဲ ရှိတာကြောင့် ကျမခလေးတွေဟာ ကျောင်းဆရာတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ ဖြစ်လာဘို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်တော့မှ မရှိတာပါပဲရှင်။
Posted by Kaw Mu Doh at 11:39 PM0comments
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့မဈေးဖျက်ပြီး ရှော့ပင်းမောလ်ကြီး ဆောက်မည်
ခိုင်မင်း/ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့မဈေး တခြမ်းကို ဖျက်သိမ်းပြောင်းရွှေ့ပြီး ရှော့ပင်းမောလ် တခု တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး ဖျက်သိမ်းမည့် ဈေးဟောင်းဆိုင်ခန်းများအတွက် အလျော်ပေးမည်မဟုတ်သည့်အတွက် ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များ မကျေမနပ် ဖြစ်နေသည်။
ဖျက်သိမ်းမည့်အခြမ်းမှာ ပျဉ်းမနားမြို့လယ် ဗိုလ်တောက်ထိန်လမ်းမကြီး တောင်ဘက်အခြမ်းဖြစ်ကာ ၎င်းအပိုင်းရှိ ဆိုင်ရှင်များအား
တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားသည့် ဈေးသစ်ကြီး အတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းများအား ၀ယ်ယူခွင့်ပေးမည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသော်လည်း အစားထိုး လျော်ကြေးပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားသည့် ဈေးသစ်ကြီးမှာ ပျဉ်းမနားမြို့ အရှေ့ဘက် (၂) မိုင်ခန့်အကွာရှိ ကင်ပွန်းတန်း ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပြီး ဈေးသစ်ကြီးရှိ ဆိုင်ခန်းများ၏တန်ဖိုးမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ခန့် ရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းနေသောကာလတွင် ၀ယ်ယူနိုင်သူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
အလားတူပင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဆန်းစက ပျဉ်းမနားမြို့မဈေးထဲရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်ခန်းများအား ကင်ပွန်းတန်းကျေးရွာအနီးရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည့်အတွက် ယခုအခါတွင် မြို့သူမြို့သားများသည် အသီးအနှံများကို မြို့ပြင်ထွက် ၀ယ်ယူနေကြရသည်။
အာဏာပိုင်များက မြို့မဈေးအတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရောင်းချပါက အရေးယူမည်ဟု ပြောကြားထားသည့်အတွက် မြို့မဈေးထဲရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ တိတ်တဆိတ် ခိုးရောင်းချနေရသော လက်လုပ်လက်စားဈေးသည်များမှာ အထိတ်တလန့်ဖြင့် ရောင်းချနေကြရသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရှိ စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းများသည်လည်း နေပြည်တော်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပြီးကတည်းက ရော်ဘာနံပါတ်တုတ်များကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဆိုသည်ကို ဈေးသည်များ နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြသည်။
ယခုရွှေ့ပြောင်းမည့် မြို့မဈေးကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ပျဉ်းမနားမြို့တွင် တာဝန်ကျခဲ့သော အမှတ် (၆) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ (၆) မှူး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ဘို ယခု နအဖအဖွဲ့ဝင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘိုက မူလဈေးဟောင်းကို ဖျက်ပြီး ယခုမြို့မဈေးကို တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်ကလည်း ယခုကဲ့သို့ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် ဆိုင်ခန်းများမ၀ယ်ယူနိုင်ဘဲ လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 8:58 PM0comments
အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်အချို့ မြေနီကုန်းမှာ ဆန္ဒပြလမ်းလျှောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆို
ယနေ့နေ့လယ် (၂) နာရီခွဲခန့်က ရန်ကုန် မြေနီကုန်းတွင် အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်ပေးရေး ပိုစတာများကိုင်ဆောင်ပြီး လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြကြကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောသည်။
“ဘာ့ကြောင့် ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေထဲမှာ ယောက်ျားတွေက တိုက်ပုံတွေ
ကိုယ်စီဝတ်ထားတာတွေ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးက များတယ်။ (၃) နာရီလောက်လဲကျရော သူတို့ကို ရဲတွေက လာဖမ်းသွားတော့တာပဲ” ဟု မြေနီကုန်း မီးပွိုင့်အနီးနေသူတဦးက ပြောသည်။ သို့သော် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူများ အဖမ်းခံရခြင်း ရှိမရှိ ယခုအချိန်ထိ သီးခြားအတည်ပြုချက် မရရှိသေးပေ။
အန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းကမူ အဆိုပါ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူများထဲတွင် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် မထက်ထက်ဦးဝေနှင့် ကိုထွန်းထွန်းဝင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်ဟုကြားရကြောင်း ခေတ်ပြိုင်ကို ပြောသည်။ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့သည့် အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်များမှာ ကိုထွန်းထွန်းဝင်း (စမ်းချောင်းမြို့နယ်) မထက်ထက်ဦးဝေ (ရွှေပြည်သာမြို့နယ်)၊ ရဲနီဦး၊ ပြေပြေ၊ အောင်ဖြိုးဝေ၊ မင်းသိန်း၊ ၀င်မြင့်မောင် (ခ) ပဲပြုတ်၊ ကောင်းထက်နိုင်နှင့် သက်မောင်ထွန်းတို့ဖြစ်သည်ဟု အေအေပီပီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မျက်မြင်သက်သေအချို့၏ ပြောဆိုချက်အရ အဆိုပါလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူများသည် အန်အယ်လ်ဒီရုံးရှေ့မှ စတင်ထွက်ခွာပြီး ဒဂုံစင်တာရှေ့မှ ဖြတ်ကာ စမ်းချောင်း လွှတ်တော်သို့ အသွား အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 8:48 PM0comments
thee lay thee @ new york city.
Posted by အာဇာနည် at 6:11 PM0comments
9 NLD Youth Members were arrested
Today, the National League for Democracy (NLD) party heldaceremony to mark the 61st anniversary of Burma Independence Day at their headquarters. After the event, nine NLD Youth members marched from NLD headquarters to Sanchaung Township, Rangoon, holding photographs and placards with Daw Aung San Suu Kyi's image. They called for the release of all political prisoners, and demanded national reconciliation.
When they arrived at the public square in Sanchaung Township, they were arrested by members of the Swan Arr Shin (People’s Power Force) the regime's hired thugs, and brutally beaten. Their whereabouts are now unknown.
Tun Tun Win (from Sanchaung Township), Htet Htet Oo Way (from Shwepyithar Township), Ye Ni Oo, Pyae Pyae, Aung Phyo Wai, Min Thein, Win Myint Maung (aka) Pe Pyoat, Kaung Htet Naing, and Thet Maung Tun.
Ko Tate Naing at +66-(0)81-2878751
Ko Bo Kyi at +66-(0)81-3248935
U Aung Myo Thein
Assistant Association for Political Prisoners (Burma)
Contact: info@aappb.org, info@fbppn.net
Web: http://www.aappb.org, http://www.fbppn.net
Posted by အာဇာနည် at 6:09 PM0comments
တကယ်တုံးတာက သူတို့ 
Posted by အာဇာနည် at 5:22 PM0comments
stilwell road (သို့ )Burma Road (သို့ )လီဒိုလမ်းမ (သို့ ) ပိုးလမ်းမကြီး (သို့ ) သေမင်းတမာန်လမ်းမ
Burma's Stilwell Road: A backbreaking WWII project is revived
Posted by အာဇာနည် at 5:08 PM0comments
မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီပေးရေး ဂမ်ဘာရီအဆိုပြု
NEJ/ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၈
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၂,၀၀၀) ကျော်လွှတ်ပေးရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေးပြောင်းလဲမှုများလုပ်ရန် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ငွေကြေးအကူအညီ မက်လုံးပေးကမ်းလှမ်းသင့်ကြောင်း ဂမ်ဘာရီ၏ လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာ၌ အဆိုပြုထားသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိများကို ကိုးကားပြီး
Washington Post သတင်းစာက ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘမ်ကီမွန်းထံတင်ပြသည့် ဂမ်ဘာရီ၏ လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာထဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးမက်လုံးပေးကူညီရန် တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထုိ့ပြင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့များက ၁၉၈၈ ခုနောက်ပိုင်းမှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးကူညီမှု ပိတ်ဆို့ထားသည့်ကိစ္စ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အိုဘားမား အမေရိကန်အစိုးရသစ်အား မကြာခင် ဖိအားပေး တောင်းဆိုသွားမည်ဟုလည်း ထိုအစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် ဂမ်ဘာရီ၏ အဆိုပြုချက်သည် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်း ဂမ်ဘာရီ မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်စဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ရော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်ပါ တွေ့ခွင့်မပေးခဲ့သဖြင့် မအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုလသံတမန်ရေးနည်းလမ်းကို ကယ်တင်ရန်ကြိုးပမ်းချက်တရပ်အဖြစ် ဝေဖန်သူများက ထောက်ပြသည်။
ဂမ်ဘာရီသည် ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းလဲချင်စိတ်မရှိသည့် စစ်အစိုးရကို ကိုင်လှုပ်ရာ၌ တိုးတက်မှုရှိပါသည်ဆိုပြီး ပြရန်သက်သက် ရည်ရွယ်သည်ဟုလည်း ဝေဖန်ကြသည်။
မကောင်းသည့် အပြုအမူများအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဆုလာဘ်ပေးရန် မသင့်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာစစ်အစိုးအပေါ် ငွေကြေးကူညီရေးအစီအစဉ်ကို အမေရိကန်နှင့် ယူကေနိုင်ငံများက ဆန့်ကျင်သည်။
ဂမ်ဘာရီကမူ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ တိုးပေးရန် တောင်းဆိုထားသည့်အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရအား နိုင်ငံခြားအကူအညီများများရအောင် ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများက လုပ်ပေးသင့်သည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာ၌ အဆိုပြူထားသည်။
မြန်မာအပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကြိုးပမ်းမှုများအား ညှိနှုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ငွေကြေးကူညီရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်အတွက် စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအဖွဲ့တခု တည်ထောင်ရေး ကိစ္စကိုလည်း ဂမ်ဘာရီက အကြံပြုထားသည်။
ကူညီသည့်ငွေကို စစ်အစိုးရက အစိုးရထောက်ခံသူများအတွက် လှည့်မသုံးနိုင်ရေး၊ လိုအပ်နေသည့် မြန်မာပြည်သူများထံ တိုက်ရိုက်ငွေပေးနိုင်ရေးတို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂသည် ဒိန်းမတ်၊ ဂျပန်၊ နယ်သာလန် နော်ဝေစ သည့် နိုင်ငံများနှင့် စတင်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်သည်။
ဂမ်ဘာရီ၏ နည်းဗျူဟာသစ်ကို လာမည့် ၂၀၀၉ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရထံ တင်ပြရန် ဂမ်ဘာရီက မှန်းထားသည်ဆိုသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ခွင့်သေချာမှ တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ဂမ်ဘာရီ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် စစ်အစိုးရဘက်က အပြူသဘောတုံ့ပြန်မှသာ ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ် သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
ဂမ်ဘာရီ၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ရေး အဆိုပြုချက်ကို တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့က သဘောမတူသည့်အတွက် အကောင်အထည်ပေါ်ရန် အလားအလာ နည်းပါးသည်ဟု သံတမန်အချို့က ယူဆသည်။ နိုင်ငံများတွင် ငွေကြေးစီးပွားကပ်ဆိုက်နေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးကူညီရေး မဖြစ်နိုင်ဟု သံတမန်တဦးက ပြောသည်။
ဂမ်ဘာရီ၏ ၂၀၀၈ မတ်လခရီးစဉ်၌ ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဖြေရှင်းပေးရန် အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖိုရမ်တခု တည်ထောင်ပေးမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်သာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါက ပိုထိရောက်မည်ဟု ဗိုလ်မှူးချူပ် ကျော်ဆန်းက ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ဂမ်ဘာရီတောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မရှိကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးထားရခြင်းသည် တိုင်းပြည် အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးအောင် ဖန်တီးပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုကို အထိပါးမခံနိုင်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ဂမ်ဘာရီတောင်းဆိုသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စစ်အစိုးရ ဆွေးနွေးရေးကိစ္စသည်လည်း ထိပ် တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး၊ အလုံးစုံပျက်သုဉ်းရေး၊ စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ရေးနှင့် အလုံးစုံပိတ်ဆို့ရေး (၄) ချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က စွန့်လွှတ်မှသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ပြောထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအချက်များကို အန်အယ်လ်ဒီက လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သဖြင့် မကြေ ညာဟု တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းသည် ပိတ်ဆို့ရေး လက်နက်ပြန်သုံးမည်ဟု ခံယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်း က ပြောခဲ့သည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 2:40 PM0comments
ပါလက်စတိုင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြန်ထိန်းကြဖို့ ဘန်ကီမွန်းတိုက်တွန်း
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းက Hamas စစ်သွေးကြွအုပ်စုအကြား တဘက်နဲ့ တဘက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ချက်ချင်း ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ဆော်ဩလိုက်ပါတယ်။ ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်ဒေသ တ၀ှမ်းက အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို လက်မခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့မနေ့က New York က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတခုမှာ
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်က ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီစစ်ရေး ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှု အပေါ်မှာ လည်း မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဘက် တွေ့ဆုံ စကားပြောရေးနဲ့အဓွန့်ရှည်မယ့် အဖြေကို ရှာတွေ့ နိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးပမ်း အားထုတ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ဂါဇာဒေသမှာ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေကို ၀င်ခွင့်ပေးဖို့အစ္စရေး ခေါင်းဆောင်တွေက အာမခံပြီး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရုရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Sergei Lavrov က Hamas အုပ်စုကို Fatach အဖွဲ့ ခွဲက ပါလစတိုင်း သမ္မတ Mahmoud Abbas နဲ့တွေ့ဆုံ စကားပြောဖို့ ငြင်းဆိုတယ်ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူတွေအနေနဲ့သမ္မတ Abbas ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို လက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းတုန်းကလည်း ဂျာမဏီဝန်ကြီးချုပ် Angela Merkel ကလည်း ဂါဇာကမ်းမြှောင်ဒေသ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ ပတ်သက်ပြီး Hamas အုပ်စုကို ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
Posted by Kaw Mu Doh at 2:07 PM0comments
သူထက်ချော.သူ့ ထက်တော် သူထက် လူတွေချစ် လို့ခွေးအကြီးငရွှေ.မနာလိုဘူးတဲ့ဗျို့ 
ဦးသန့်ပုံ မျက်နှာဖုံးတွင် ခွင့်မပြု
Monday, 29 December 2008 18:53 အေးချမ်းမြေ့
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် (ဓာတ်ပုံ - UN/Grunbaum)
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ ဓာတ်ပုံကို မြန်မာသစ် မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး အဖြစ် စာပေစိစစ်ရေးက ခွင့်မပြုကြောင်း ၎င်းမဂ္ဂဇင်းနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝန်းမှ ကြားသိရသည်။
မြန်မာသစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ယခင်လက လယ်တီဆရာတော်ကြီးအကြောင်း၊ ယခင်လမတိုင်မီက ဦးမေအောင် အ ကြောင်း စသည်ဖြင့် ထင်ရှားသူရှေးမြန်မာများ၏ မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု တပတ်တွင်မူ မြန်မာပြည်အတွက် ထင်ရှားဂုဏ်ယူဖွယ် ဖြစ်သော ကုလအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆောင်းပါး ဝေဝေဆာဆာဖြင့် ဖော်ပြရန် ဖြစ်သော်လည်း မျက်နှာဖုံး ဓာတ်ပုံခွင့်ပြုချက်မရသဖြင့် တခြားပုံတပုံ လွှဲပြောင်းတင်ပြရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးသန့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေမည့် ၄ ကြိမ်မြောက် မြန်မာသစ်မဂ္ဂဇင်း အတွက် ကဗျာစုစုပေါင်း ၁၀ ပုဒ် ရွေးချယ် တင်ပြထားရာ စိစစ်ရေးက ၇ ပုဒ်ပယ်ခဲ့ပြီး ဆောင်းပါး ၅ ပုဒ်ကိုပါ ဖြုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရ သည်။
လာမည့် ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့သည် ဦးသန့်၏ အနှစ် ၁၀၀ ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး ဦးသန့် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အ ထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စာတိုက်၊ ဆက်သွယ်ရေးဌာနက တံဆိပ်ခေါင်းများ ထုတ်ဝေမည် ဖြစ် သည်။
ဦးသန့်သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူးကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အထိ သက် တမ်း ၂ ခုစာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၎င်း တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကျူးဘား ဒုံးပျံအရေးအခင်းနှင့် ကွန်ဂို ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာများ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
အာရှ၏ ပထမဆုံးသော ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ကာ မြန်မာပြည်အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ် ဦးသန့်၏ ဈာပန အခမ်းအနားကို ဦးနေဝင်းအစိုးရက ဖြစ်သလို ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ထိုစဉ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား များက ဦးသန့်ရုပ်အလောင်းကို လုကာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်း မြေချရန် ကြံစည်ရာမှစ၍ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ယနေ့တိုင် ထင်ရှားသော “ဦးသန့်အရေးအခင်း” ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က အရေးအခင်းကို ဦးနေဝင်းအစိုးရက အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းခဲ့သောကြောင့် ကျောင်းသား၊ ပြည်သူ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ကျဆုံးသူများ၊ အရေးယူ ထောင်ချခံရသူများ ရှိခဲ့သည်။
ဦးသန့်အကြောင်း ဖော်ပြမည့် မြန်မာသစ်မဂ္ဂဇင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် ထင်ရှားလူသိများကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အ ကျိုးကို သယ်ပိုးခဲ့သူ ရှေးမြန်မာကြီးများအကြောင်းကို တဦးချင်းစီ လစဉ်ဖော်ပြသွားမည့် မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည်ဟု အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝန်းက ပြောပြသည်။
“ဒီမဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုပါ စိစစ်ရေးကို တင်ပြရတယ်” ဟု မြန် မာသစ် နှင့် နီးစပ်သူကပြောပြသည်။
မကြာသေးမီအချိန်က မဂ္ဂဇင်းများအားလုံးတွင် ရေးသားသူ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို စိစစ်ရေးသို့ တင်ပြရမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း တရားဝင်အကြောင်းမကြား သေးကြောင်း ရန်ကုန်မဂ္ဂဇင်း အသိုင်းအဝန်းမှ သိရသည်။
ယခုလက်ရှိ ရန်ကုန်အခြေစိုက် မဂ္ဂဇင်းများ၏ အနေအထားမှာ ပုံစံပြောင်းကာ တိုးတက်မှုရှိလာပြီး စာပေ ပုံသဏ္ဍန်မဂ္ဂဇင်းများ၊ ပညာပေးမဂ္ဂဇင်းများ သုံး၊ လေးလအတွင်း နေရာရလာသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ရန်ကုန် အခြေစိုက် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ တဦးကပြောပြသည်။
ယခင်ကဆိုလျှင် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်သည့် ပေါ့ပ် (Popular) မဂ္ဂဇင်းများကိုသာ ထုတ်ဝေကြသော် လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် လူထုကို အသိဥာဏ်၊ အတွေးအခေါ်၊ အနုပညာ မြှင့်တင်ပေးမည့် မဂ္ဂဇင်း ပုံစံများ အား စီးပွားရေးအရ အမြတ်အစွန်းမရှိသလောက်ဖြင့် ထုတ်ဝေလာသည်ကို တွေ့ရကြောင်း သူကဆက် ပြော သည်။
သာဓက အနေဖြင့် မြန်မာသစ်၊ ပိတောက်ပွင့်သစ်၊ စတိုင်သစ်၊ နွယ်နီ၊ ရနံ့သစ်၊ လှိုင်းသစ် စသည့်မဂ္ဂဇင်းများ ဖြစ်သည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:10 PM0comments
ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၀၈ သတင်းများ
Publish at Scribd or explore others: Politics Literature
Posted by အာဇာနည် at 12:04 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 12:02 PM0comments
နားဂစ်မုန်တိုင်းရံပုံငွေနာမည်ဖြင့် ကညနတို့ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ထုတ်ပေး ကျပ်သိန်းချီအခွန်ကောက်
တနင်္လာနေ့၊ 29 ဒီဇင်ဘာလ 2008 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ယခုနှစ် ဂျွန်လမှစ၍ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွယ်လင်ခရိုင်၌ နအဖအာဏာပိုင်များ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်လက်ခံလုပ် ပေးရာ ဆိုင်ကယ် တစ်စီး ကျပ်ငွေသိန်းချီကောက်ယူကြောင်း၊ နားဂစ်မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက်ရံပုံငွေဟု နာမည်တပ် ကောက်ယူသော ငွေများကို နအဖအာဏာပိုင်အသိုင်းအ၀ိုင်းများအတွင်းပင် ပြန်လည်ဝေငှစားသုံး
အောက်တိုဘာလအထိ ၃-၄ လအကြာ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ခွန်လျှောက်ခွင့်ပေးထားသဖြင့် လွယ်လင်ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်အသီးသီးမှ တရုပ် ဆိုင်ကယ်၊ ထိုင်းဆိုင်ကယ် အစီးရေ ၁ သိန်းထက်မနဲ လျှောက်လွှာတင်ကြကြောင်း နယ်စပ်ရောက် လွယ်လင်ဒေသခံတစ်ဦး ကပြောပြသည်။
“ ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစားအလိုက် လိုင်စင်ခွန် တစ်စီး ကျပ် ၁၅၀ ၀၀၀ ကနေ ၃၇၀ ၀၀၀ အထိကောက်တယ်။ အလယ်အလတ်တန်းစားကတော့ တစ်စီး ကျပ် ၂၀၀၀၀၀ ပေါ့။ အာဏာပိုင်တွေ ပိုက်ဆံ ကျပ်သန်းပေါင်း ၂ သောင်းလောက်ရသွားတယ်” ဟု ဆို၏။
လွယ်လင်မြို့သို့ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်လာလျှောက်သော ကွန်ဟိန်း၊ ကာလိဘက်မှဒေသခံတစ်ဦးကလည်း“ ရုံးရောက်ရောက်ချင်း ကညနကထုတ်တဲ့ ၂၀၀၈ ပြက္ခဒိန်တစ်စောင်ကို တုံကင်အဖြစ် ကျပ် ၁၅၀၀ ကနေ ကျပ် ၄၀၀၀-၅၀၀၀ အထိ ကြားပွဲစားတွေကနေ အဆင့်ဆင့်ဝယ်ရတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျပ် ၇၀၀၀ အထိတောင် ဖြစ် သွားတယ်ဆိုဘဲ။ တုံကင်ပြားသာဆိုတယ်။ ရုံးအရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင် ပွဲစားလုပ်နေတော့ ပွဲစားနဲ့မလုပ်တဲ့ လူတွေ အတွက် ၁၀ ရက် တသီတင်း စောင့်လည်း ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ကို မရောက်ဘူး။ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် လူပမ်း ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောပြသည်။
ကောက်ခံသော လိုင်စင်ကြေးကို နာဂစ်မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ရံပုံငွေဟုဆိုသော်လည်း စင်စစ်မှာအစိုးရ ဘဏ္ဍာငွေ ဟုဆိုကာ နေပြည်တော်သို့သာလွှဲပေးကြောင်း၊ ထို့အပြင် ရဲ၊ ကြံ့ဖွံ့အသင်းအတွက်လည်း တဖွဲ့ ၄-၅ သောင်း ဝေငှပေးကြောင်း ကညနရုံးအရာရှိနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ လွယ်လင်ဒေသခံ ကြားပွဲစားတစ်ဦး ကလည်း ပြောပြသည်။
တုံကင်ပြားသာဝယ်ရပြီး လိုင်စင်မလျှောက်ရသူ ဒေသခံတစ်ချို့ကမူ “ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် သူတို့တွေ စားကွက်ရှားတော့ မယ်ဆိုတော့ အခုကတည်းက ရသမျှ စုထားဆောင်းထား ကောက်ထားတာလည်းဖြစ် နိုင်တာဘဲ” ဟုဝေဖန်ကြသည်ဟုဆို၏။
ယခုနှစ်မေလ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအားနာဂစ် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုအပြီး ရန်ကုန်မြို့မှလွှဲ၍ နယ်မြို့တိုင်းလိုလို၌ စစ်အစိုးရဆိုင်ကယ်လိုင်စင်များထုတ်ပေးကာ တစ်စီးလျှင်အနည်းဆုံး ကျပ်ငွေ သိန်းချီကောက်ယူခဲ့သည်ဟု လွယ်လင်ကညနရုံးဝန်ထမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြားသိရသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 8:08 AM0comments
ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းသားများ မိတ်သဟာရပွဲတော် ကျင်းပ
Monday, 29 December 2008 ဖြိုးကြီး
ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းသားများ မိတ်သဟာရပွဲတော်ကို မဲဆောက်မြို့ရှိ ဆာသူးလေ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာစာသင်ကျောင်း (၆၀) ကျော်ရှိသည့်အနက် ကျောင်းပေါင်း (၃၀) နှင့် ထိုင်းစာသင်ကျောင်း (၄) ကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူ၊ ဆရာဆရာမများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
“ထိုင်းနဲ့ မြန်မာကလေးတွေ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြင်ချင်တယ်၊ သူတို့အချင်းချင်း အသိပညာ အတတ်ပညာတွေကို ဖလှယ်ဖို့၊ နောက်တခုက ထိုင်းကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမတွေရော ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမတွေရော ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပညာရေးကော်မတီ (BMWEC) ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာမ နော်ဖောရေက ပြောသည်။
အဆိုပါပွဲတော်တွင် ဘာသာစကားခြားနားမှုမရှိဘဲ ထိုင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံး အမူအယာကိုကြည့်ရုံဖြင့် နားလည်နိုင်သည့် ကစားနည်းများကို (BMWEC) က စီစဉ်ထားကြောင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ/ဆရာမများအစည်းအရုံး အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စန္ဒာဝင်းက ပြောသည်။
“ဒီပွဲကို ကျောင်းတိုင်းက လာကြတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ်မသိတဲ့သူတွေကိုလဲ အခုသိရတော့ ပျော်ပါတယ်၊ အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကို မတွေ့ဖူးပါဘူး၊ သမီးက မြန်မာပြည်မှာတော့ ကျောင်းမနေခဲ့ရဘူး”ဟု ပွဲတော်သို့ ရောက်လာသည့် (SAW) မြန်မာစာသင်ကျောင်းမှ လေးတန်းကျောင်းသူတဦးက ပြောသည်။
(BMWEC) အနေဖြင့် ယခင်က ပွဲတော်များ ကျင်းပခဲ့သော်လည်း ယခုအကြိမ်ကျင်းပရာတွင် ထိုင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပါဝင်လာသည့်အတွက် မြန်မာကလေးငယ်များအနေဖြင့် ထိုင်းကျောင်းသားများ နေပုံထိုင်ပုံများကို လေ့လာခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆရာမများအနေဖြင့်လည်း ပြုပြင်စရာရှိသည်များကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာမ ဒေါ်စန္ဒာဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကျောင်းသားဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါလား၊ ကျောင်းသားဘဝမှာ လူမျိုး နိုင်ငံ ခွဲခြားတယ်ဆိုတာလဲ မရှိဘူး၊ ဘာသာခွဲခြားတာလဲမရှိဘူး ဆိုတာကို ကလေးတွေ သိသွားစေချင်တယ်၊ သူတို့အချင်းချင်း ကိုယ်အမူအယာနဲ့ပဲပြောပြော၊ ပြောတတ်လို့ပဲပြောပြော ကျမတို့ရရှိတဲ့ ရလဒ်က ကလေးအချင်းချင်းဟာ အတူတူပါပဲ”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသရှိ မြန်မာကလေးငယ်များသည် ထိုင်းကလေးများအား အလိုလို အားငယ်ကြောက်ရွံ့မှုများ ရှိနေသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ မကြာခဏ ပူးပေါင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ထိုင်းကလေးငယ်များနှင့် ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းသားများ မိတ်သဟာရပွဲတော်ကို ယနေ့မှ စတင်ကာ ဒီဇင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့အထိ နှစ်ရက်အကြာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 8:05 AM0comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာ ၃၀၀ကျော် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မှာ ပျောက်ဆုံးနေ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့က ထွက်ခွာလာကြတဲ့ လူ ၃၀၀ကျော်ဟာ ကပ္ပလီကျွန်းနဲ့ နီကိုဗာကျွန်းတို့ အနီးမှာ ပျောက်ဆုံးနေကြတယ်လို့၊ သူတို့ ရေနစ်ကုန်ကြပြီလို့လည်း စိုးရိမ်ရတယ်လို့ အိန္ဒိယ ကမ်းခြေစောင့်များက ပြောကြားကြပါတယ်။
ပင်လယ်ထဲမှာ သတင်း ၂ ပတ်အကြာအဲဒီ စက်လှေ မြောနေကြပြီး စက်လှေပေါ်မှာလည်း အစားအစာနဲ့ သောက်ရေ ပြတ်လို့ ရေထဲကို ခုန်ချတယ်။ အဲဒီထဲက ၁၀၀လောက်ကို ကယ်တင်နိုင်ပေမယ့် ၃၀၀ကျော်ကတော့ ပျောက်ဆုံးနေဆဲပဲလုိ့ သူတို့က ဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒီ လူတွေထဲက အများစုဟာ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဆက်လက် အလုပ်ရှာဖို့ ထွက်ခွာလာကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၅ရက်လောက်က ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံကနေ စက်လှေ အသီးသီးနဲ့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး တနေရာမှာ သူတို့ စုပြီး စက်လှေ တစ်စင်းပေါ်ကို အဲဒီ လူ ၄၀၀ စုပြုံ တက်လာခဲ့ကြတာ၊ သောကြာနေ့မှာ အဲဒီလို ခုန်ချခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းများမှာ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:50 AM0comments
မန္တလေးထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး သေဆုံး
မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ နေရေးထိုင်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်သံတွေ ကြားနေရတဲ့ အချိန်မှာပဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး ထောင်ထဲမှာပဲ ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလို့ ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ မိသားစုက ပြောပါတယ်။ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုဋ္ဌေးလွင်ဦး
ဟာ မန္တလေးထောင်တွင်းမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့ ဒီကနေ့ပဲ သူရဲ့ဈာပနကို မိသားစုက ကျင်းပခဲ့တာပါ။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) လူငယ်အဖွဲ့ဝင် ကိုဋ္ဌေးလွင်ဦး တယောက် ထောင်တွင်းဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေအောက်မှာ ကျန်းမာရေးကုသစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်း လုံလုံလောက်လောက် မရနိုင်ပဲ ဖြစ်နေရာက အခုနောက်ဆုံး ကွယ်လွန်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်ရတာလို့ မိသားစုကပြောတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ် ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ကိုဋ္ဌေးလွင်ဦး ဟာ ထောင်တွင်းရောက်မှ နာတာရှည်ရောဂါတွေ စွဲကပ်လာရာက မနေ့တုန်းကပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့လို့ မိသားစုက ဒီကနေ့ပဲ မန္တလေးမြို့မှာ သဂြိုဟ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ မခင်လှမြင့် က ပြောပါတယ်။
“အမအမျိုးသားက မနေ့ ၂၈ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၅နာရီနဲ့ ၅မိနစ်မှာ ဆုံးတယ်။ ဒီနေ့မနက် ၁၁နာရီမှာ ထောင်ကနေ ထုတ်ပေးတယ်။ အခု ၁၂နာရီမှာ သင်္ဂြုလ်တယ်။ ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားတာတုန်းဆိုရင် ၂၀၀၈ခုနစ်စမှာ တီဘီဖြစ်ပြီး သတိလစ်ပြီး တတ်တဲ့ရောဂါ ကနေပြီး သွက်ချာပါဒ ဖြန်းတယ်၊ ပါးတခြမ်းရွဲ့ပြီး ကိုယ်တခြမ်းသေသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဆေးရုံပေါ်မှာပဲ ထားတာ ၃လကျော် ၄လ လောက်ရှိပြီ။ ဆရာဝန်က သိပ်ပြီး ဘာဆေးဝယ်ဆိုပြီးတော့ ရေးပေတာ မရှိဘူး။ ဆေးဝါးလုံလုံလောက်လောက် မရဘဲ အနားတခြား ဆေးတခြားတွေ ဖြစ်ပြီး အခုလို ဖြစ်ရတာလို့ အမ ယူဆတယ်။”
ကိုဋ္ဌေးလွင်ဦး ဟာ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO) ကို ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီဝင် ၁၁ ဦးနဲ့အတူ အာဏာပိုင်တွေက ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထဲမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကို ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံခဲ့ရပြီး ကွယ်လွန်ချိန်အထိ မန္တလေးထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီလို ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ နေရာမှာ ကျန်းမာရေးယိုယွင်းလာရာက လုံလောက်တဲ့ ကုသမှုတွေလည်း မရလို့ ခုလို ကွယ်လွန် ဆုံးပါးတဲ့အဖြစ်အထိ ကြုံရလို့လည်း မိသားစုအနေနဲ့ ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေရတယ်လို့လည်း ဇနီးသည်ဖြစ်သူက ဆိုပါတယ်။
“ထောင်မကျခင်က ဘာရောဂါမှမရှိဘူး။ အမနဲ့ အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ် အတွင်းမှာ ဆေးတောင် မထိုးဖူးဘူး၊ ညောင်းတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အနှိပ်တောင် မထောင်ဘူး၊ အပြင်မှာတော့ ၀၀ဖြီးဇြီးပဲ ရောဂါမရှိဘူး၊ အမရပူရနဲ့ မန္တလေးအသွားအပြန် ဘီးနင်းပြီး စာသင်ကျောင်းကို သွားတယ်။ ထောင်ထဲမှာတောင် ၄နှစ်မှာ ရောဂါမရှိဘူး၊ ၅နှစ်ထဲရောက်မှာ ရောဂါတွေတွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်ယောင်္ကျားဖြစ်တော့ ဇနီးသည် တယောက်အနေနဲ့ ၀မ်းနည်းပေမယ့် သူဟာ အများအတွက် ကောင်းတာလုပ်တာပဲ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သားအတွက် ၀မ်းနည်းတယ်။ သားကလည်း သူ့အဖေကို တွေ့ချင်နေတယ်။ သား ၃နှစ်သားမှာ ထောင်ကြသွားတော့ သိတတ်နေပြီလေ။ သူ့အဖေနဲ့ အပြင်မှာ အတူတူနေချင်တယ်။ သူ့အဖေကိုပဲ အမြဲတမ်းတွေ့ချင်နေတယ်။ အခုဆိုရင် ပိုတောင် ၀မ်းနည်းသေးတယ်။ သားရှင်ပြု အလှူလှည့် အပြန်မှာ ကိုဌေးလွင်ဦး သေတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အမရင်ထဲ ဘယ်လို ခံစားသွားရသလဲဆိုတာ။”
မနေ့ကပဲ ဆုံးပါးသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုဋ္ဌေးလွင်ဦး ရဲ့ ဇနီးသည် မခင်လှမြင့်ပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက ဒီနှစ်ထဲမှာ ရာဂဏန်းရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို စွပ်စွဲချက်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဝေးလံခေါင်ဖျားပြီး မိသားစုလက်လှမ်းမမှီရာ ရာသီဥတု ကြမ်းတမ်းရာ အကျဉ်းထောင်တွေကို ပို့ဆောင်ခဲ့လို့ သူတို့အတွက် ကျန်းမာရေးကအစ စိုးရိမ်ပူပမ်မှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ ကိုဋ္ဌေးလွင်ဦး မတိုင်မီ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ မန္တလေးထောင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရာပြည့် ဟာဆိုရင်လည်း အလားတူ ကွယ်လွန်ဆုံးပါးခဲ့တာပါ။ ပြည်ပမှာ အခြေစိုက်ထားပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့် လေ့လာနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ အရဆိုရင်လည်း ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆိုအုံကြွခဲ့ကြတဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကျဉ်းထောင်တွင်း ဆုံးပါးခဲ့တာ အနည်းဆုံး ၁၃၈ ဦးအထိ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:49 AM0comments
သုံးရက် ဆက်တိုက် အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ ပါလက်စတိုင်း ၃၀၀ကျော်သေဆုံး
ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်ဒေသရှိ ဟားမတ်စ်တို့ကို အစ္စရေးက လမ်းကြောင်းကနေ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာ တတိယနေ့ထဲကို ၀င်လာနေပြီး သေဆုံးသူ ပါလက်စတိုင်း လူဦးရေလည်း ၃၀၀ထက် မနည်းရှိသွားပါပြီ။ ဂါဇာရှိ ဆေးရုံနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက်များကို အခြေခံပြီး အရပ်သား ၅၁ ယောက်ထက် မနည်း သေဆုံးကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီ တခု က
ပါလက်စတိုင်း တာဝန်ခံများကလည်း ဟားမတ်စ် အဖွဲ့ဝင် ၁၈၀ သေဆုံး သွားကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဂါဇာမြို့ရှိ ဟားမတ်စ် ပြည်ထဲရေး ဌာနကို အစ္စရေး တိုက်စစ်လေယာဉ်များက ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ပြီး အစ္စလာမ် တက္ကသိုလ်ကိုလည်း ၅ ကြိမ်ထက်မနည်း ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောကြားကြပါတယ်။
ဂါဇာကနေ အစ္စရေး နယ်မြေထဲကို ထပ်သလဲလဲ ပစ်ခတ်နေလို့ လက်တုန့်ပြန် တိုက်ခိုက် ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အစ္စရေး နိုင်ငံက ဆိုပါတယ်။ ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်ဒေသကို ကန့်သတ် စစ်နယ်မြေ အဖြစ် အစ္စရေး စစ်တပ်က ကြေညာလိုက်ပြီမို့ အရင်တုန်းကလို မြေပြင်က ၀င်တိုက်မယ့် လုပ်ရပ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဟားမတ်စ်တို့ ဒုံးကျည်များနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ အစ္စရေး ၁ ယောက်သေဆုံးပြီး ၈ ယောက် ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း အစ္စရေး နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း အက်ရ်ှကာလွန် မြို့တော်ဝန် က ပြောဆိုပါတယ်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:47 AM0comments
The 138th political prisoner has died in Burma’s prisons, the Assistance Association for Political Prisoners (Burma) has learned. Htay Lwin Oo passed away in Mandalay prison yesterday. He was suffering from tuberculosis.
Htay Lwin Oo,ateacher and member of the National League for Democracy from Amarapura Township in Mandalay, was arrested on 21 December 2003 and sentenced to7years imprisonment under section5(J) of the Emergency Provisions Act. He was due for release in December 2009.
Global Action for Burma : Second Struggle for National Independence
“Let's unite for Democratic Federal Union of Burma”
4th January, 2009 will mark the 61st anniversary of Independence Day for Burma. Since the fall of Mandalay Kingdom, People of Burma have never given up their fight to regain their independence. Thousands of people have sacrificed their lives. Why? They had only one hope to haveachance for the future generations to enjoy the fruits of independence.
However, People of Burma have not had this chance until now. They have been under the most oppressive and brutal regime in the world. Despite of their liberation from foreign colonization, they have not yet liberated from the dictatorial oppression of their own people. Without genuine liberation, no one can enjoy the fruits of independence. To haveagenuine liberation, Burma must be established asafederal union that will guarantee democratic rights to all citizens and political equality for all ethnic nationalities.
Therefore, we call upon the People of Burma and overseas Burmese people around the world to the global action for the second struggle for national independence to establishaDemocratic Federal Union of Burma. Demonstrations andanumber of activities will take place in different countries. We would like to encourage everyone to join with us to show solidarity and unity.
“Add your voice toacall for Democratic Federal Union of Burma”
Please contact the following persons for detailed information.
Mr. Myo Thein (UK), Tel: +44 208 493 9137, Email: myothein19@gmail.com
Mr. Yin Aye , Tel: + 1 301 905 7591, Email: yindbso@gmail.com
Mr. Ko Ko Aung (Japan), Tel: + 81 090 1506 2893, Email: kokoaung_dfbjp@yahoo.com
Mr. Yin Htwe (Thailand), Email: yinhtway@gmail.com
Ko Kyaw Than (India), Burma Democratic Groups, Phone +91-9810601506
Mr. Si Thu (Canada), Email: oneloveoneburma@gmail.com
Ms. Khin Ma Ma Myo, Tel: +44 1224 524 077, Email: khinmamamyo@gmail.com
(Independence campaign isaresults-oriented coalition dedicated to second struggle for national independence)
Posted by အာဇာနည် at 11:00 PM0comments
It is the part of the burmese mission from UN report about Gambari & Burmese Ambassador from New york by Burmese Embassy.
Posted by အာဇာနည် at 10:37 PM0comments
ဒုံးယိမ်းက တူတူ ပျော်ကြရအောင်..
ဘီဘီစီ ဘန်ကောက် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် ထိုင်းဘုရင်အား ပုတ်ခတ်ရေးသားမှုကြောင့် ထောင်ကျနိုင်
NEJ/ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝဝ၈
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် ဘီဘီစီ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး သတင်းထောက် ဂျွန်နသန်ဟက်ဒ်ကို ထိုင်းဘုရင်အား ပုတ်ခတ်ရေးသားမှုဖြင့် ထိုင်းရဲအရာရှိတဦးက စွဲချက်တင်ထားရာ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် (၁၅) နှစ်ထိ ကျခံရဖွယ်ရှိသည်။
ဂျွန်နသန်ဟက်ဒ်သည် ထင်ရှားသည့် ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ဖြစ်ရုံမက ဘန်ကောက် ဘီဘီစီရုံး၏ အကြီးအကဲလည်း ဖြစ်သည်။
၎င်းအား တိုင်တန်းထားသည့် စွဲချက် (၃) ခုအနက် ဘန်ကောက် ဆူဝမ်နဖုန် လေဆိပ်ကို ပီအေဒီ ဆန္ဒပြသူများ သိမ်းသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနန်းတော်နှင့် ပီအေဒီ ဆက်နွယ်မှုကို ရေးသားခဲ့သည့် How did Thai protesters
manage it? ဆောင်းပါးလည်း ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ စွဲချက်များကို ထိုင်းရဲအရာရှိ ၀ါတာနာဆတ်က စွဲချက်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ထိုင်းအာဏပိုင်များအနေဖြင့် ဂျွန်နသန်ဟက်ဒ်အား တရားဝင် စွဲချက်တင်မည် မတင်မည်ကို မဆုံးဖြတ်ရသေးပေ။ ထိုအတောအတွင်း ဂျွန်နသန်ဟက်ဒ်အပေါ် စွဲချက်များ ဖယ်ရှားပေးရန် နယူးယော့ခ်အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်းသမားများ ကာကွယ်ရေး ကော်မတီက တောင်းဆိုထားသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 5:41 PM0comments
ပြည်ပဆန်တင်ပို့မှု အရှုံးပေါ် နိုင်ငံခြားဆန်ရောင်းသူများ လက်တွန့်
NEJ/ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈
ပထမဆုံးအသုတ်အဖြစ် နိုင်ငံခြားကို တန်ချိန် (၉,ဝဝဝ)၊ ဆန်အိတ် (၁၈ဝ,ဝဝဝ) တင်ပို့ပြီး ထူးကုမ္ပဏီ အရှုံးပြခဲ့သည့်အတွက် ကျန်ပါမစ်ရပြီးသား ဆန်ကုန်သည်များ တင်ပို့ရန် လက်တွန့်နေကြောင်း ဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင် ဆန်ကုန်သည်များ အသိုင်းအဝန်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
လောလောဆယ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ဆန်တန်ချိန် (၅၀,၀၀၀) တင်ပို့ရန် သင်္ဘောတင်နေသည့် တဦးတည်းသော ကုမ္ပဏီဆို၍
ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီသာရှိသည်။ ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်း၏သား အောင်သက်မန်းပိုင်သည့် ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီ၏ လက်ခွဲကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်သည်။
ဆန်အိတ် (၁) သိန်း တင်ပို့ခွင့်ရထားသူ ဆန်ကုန်သည်တဦးက “ထူးကုမ္ပဏီ ဒီလထဲမှာ သီလဝါကနေ ဆန် တန်ချိန် (၅,ဝဝဝ)၊ ဆူးလေကနေ ဆန် တန်ချိန် (၄,ဝဝဝ) သင်္ဘောနှစ်စီးပို့ခဲ့တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ အစိုးရကို ဆောင်ရတဲ့ အခွန်တွေ နုတ်ပြီး တတန်ကို ဒေါ်လာ (၂၄ဝ) ဝန်းကျင်လောက်ပဲရတယ်။ အဲဒါ တအိတ် ကျပ် (၁၃,၈ဝဝ) ပဲ ရှိတယ်။ သူတို့ ဝယ်ရင်းဈေးက တအိတ် ကျပ် (၁၅,ဝဝဝ) ရှိတော့ တအိတ် ကျပ် (၂ဝဝ) အရှုံးပြတယ်။ အိတ် (၁၈ဝ,ဝဝဝ) ဆိုတော့ သိန်းပေါင်း (၃၆ဝ) ကျော် အရှုံးပေါ်တယ်။ သူတို့တွေကတော့ အရှုံးပေါ်တာ အရေးမကြီးဘူး။ ဆန်တွေ နိုင်ငံခြား ထွက်သွားဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ ဆန်ကုန်သည်တွေကတော့ ဒီဆန်တင်ပို့တာကိုပဲ အဓိက လုပ်နေရတော့ အရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ ခု ဒေါ်လာဈေးတွေ ထိုးကျနေတော့ ဒီထက်တောင် ရှုံးနိုင်သေးတယ်။ ဒီတော့ အားလုံးက ပါမစ်တွေ ကိုင်ထားပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
အစိုးရက ပြည်ပဆန်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ပါမစ်များကို ဖောဖောသီသီ ချပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ယခင်က ဆန်အိတ်ရေ (၂) သိန်း၊ တန် (၁) သောင်း တင်ပို့နိုင်မှသာ ပါမစ် ချပေးသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်း ဆန်အိတ် ရေ (၁) သိန်း၊ တန်ချိန် (၅) ထောင် တင်ပို့မည်ဆိုပါကလည်း ပါမစ်ချပေးကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ပြောသည်။
သို့သော် လက်တွေ့ကျသည့် ဆန်ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်မှု တတန် ဒေါ်လာ (၃၂ဝ) နှင့် အခွန် (၁ဝ) ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချပေးခြင်း မရှိ၍ ကုန်သည်များ အခက်အခဲ တွေ့နေကြောင်း၊ လက်ရှိ (၂၅) မှတ် မြန်မာဆန်များကို ပေးသည့် ဈေးနှုန်းမှာ တတန် ဒေါ်လာ (၂၆ဝ) ဝန်းကျင်သာ ရှိကြောင်း၊ အစိုးရက တတန် (၃၂) ဒေါ်လာ အခွန်ကောက်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် မည်သို့မှ တွက်ခြေမကိုက်ကြောင်း၊ အစိုးရကို အခွန်လျှော့ပေးရန် တင်ပြသော်လည်း မရကြောင်း၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေပေးရန် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းကလည်း မည်သို့မှ စွမ်းဆောင်မပေးနိုင်၍ အားလုံးက အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း ဆန်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပဲဈေးကွက်နှင့် ကြက်သွန်ဈေးကွက် မကြုံစဖူး ပျက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဆန်ဈေးကွက်မှာလည်း ယခုကဲ့သို့ ယိုင်နဲ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့ပွဲရုံသမားများက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက် သို့ ခိုးရောင်းနေသည့်အတွက် ရန်ကုန်မှာ ရှယ်စ ဆန်ဈေးမှာ လောလောဆယ် တတင်းခွဲတအိတ်ကို (၁၂,၀၀၀) ရှိနေသည်။ စပါးဈေးကလည်း တင်းတရာ (၂) သိန်းဝန်းကျင်သာ ရှိသည့်အတွက် လယ်သမားများလည်း လယ်စရိတ်မကျေဘဲ ဒုက္ခရောက်နေသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ပြည်တွင်း၌ ဆန်ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီး ဆန်ကုန်သည်အများစု အရောင်းအဝယ် ပါးကာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြသော်လည်း တပ်ရိက္ခာဝယ်ယူရေး ကန်ထရိုက်ရထားသည့် ဆန်ကုန်သည်ကြီးများ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးနှင့် ဆန်ကုန်သည် အချို့သာ အဆင်ပြေနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 5:40 PM0comments
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမှာ ဘူတာသစ် ထပ်တည်မည် အိမ်ခြေ (၂၀,၀၀၀) ကျော် မြို့ပြင် ထုတ်ဖို့ပြင်
ပျဉ်းမနားမြို့မှာ နောက်ထပ် ဘူတာရုံသစ်တခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အချို့ နေရာပြောင်းရွှေ့ပေးရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်ခြေ (၂) သောင်းကျော် အခက်အခဲဖြစ်နိုင်သည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
နေပြည်တော်ဘူတာရုံကြီးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ရွာတော်ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ ယခုအခါ အပြီး သတ်လုဖြစ်သော်လည်း ဘူတာတည်ဆောက်ရာ မြေနေရာမှာ လယ်မြေဖြစ်ပြီး စမ်းပေါက်နေသည့်အတွက် ဘူတာအဖြစ်
အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ဘဲ စမ်းသပ်မောင်းနှင်သည့် မီးရထားစက်ခေါင်းများ (၃) ကြိမ်ခန့် တိမ်းမှောက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နေပြည်တော်ဘူတာသစ် နောက်တခုတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီက ကံထရိုက်ရရှိထားသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
ရွှေ့ပြောင်းရမည့်ရပ်ကွက်များမှာ ပျဉ်းမနားဘူတာအနီးတ၀ိုက်တွင်ရှိသည့် ရန်အောင် (၂) ရပ်ကွက်အုပ်စု အတွင်းပါဝင်သော ဂုဏ်တန်ရပ်ကွက်၊ ရန်နိုင်ဟူစိန်ရပ်ကွက်နှင့် တောင်သာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဂွကြားရပ်ကွက်များ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါရပ်ကွက်များ၌ ၀န်ထမ်းနှင့် လက်လုပ်လက်စားအများစုပါဝင်ပြီး ဂွကြားရပ်ကွက်မှာမူ ပန်းပဲလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေနှစ်သောင်းကျော်ရှိကြောင်း၊ ယင်းရပ်ကွက်မှလူများကို ပျဉ်းမနား နေပြည်တော် နယ်မြေတွင်ရှိသည့် လေတွင်းတောင်ခြေအနီးနှင့် ပျဉ်းမနားအရှေ့ ဘက် (၇) မိုင် အကွာရှိ ဆင်ဖြူတောင်ခြေအနီးတွင် ပြန်လည်နေရာချထားပေးမည်ဖြစ်သည်။
လေတွင်းတောင်သည် ပေါင်းလောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်အနီးတည်ရှိပြီး ရှမ်းရိုးမနှင့်လည်းနီးကာ ငှက်ဖျားရောဂါထူပြောသည့်အပြင် ပေါင်းလောင်းရေကာတာ၏ အောက်ခြေဘက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်အလွန်များသည်ဟု ဆည်မြောင်းကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။
ထို့အပြင် အစားထိုးပြန်ပေးမည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများမှာ ကျဉ်းမြောင်းပြီးသေးငယ်သည့်အတွက် မိသားစုဝင်များ နေထိုင်ရန်အတွက် မလုံလောက်ကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
အဆိုပါဒေသများသည် ပျဉ်းမနားမြို့နှင့် အလွန်အလှမ်းကွာသည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး ရောဂါဘယများဖြစ်ပွားမည်ကို ဒေသခံများက စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်။
“ဒီဇင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့က လာတိုင်းတယ်။ သူတို့ပြောတာကတော့ နေပြည်တော်ဘုရားကြီးပတ်လမ်း ဖောက်ဖို့လို့ ပြောသွားတယ်။ အခုတော့ မှတ်တိုင်တွေ၊ အမှတ်အသားတွေစိုက်ပြီးသွားပြီ။ မကြာခင် ရွှေ့ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျမတို့ မိသားစုတော့ ဒုက္ခပါပဲ။ ကျမက လက်လုပ်လက်စား၊ သားက၀န်ထမ်းဆိုတော့ ပြောင်းရွှေ့မယ့်နေရာရောက်ရင် ဘာလုပ်ကိုင်စားပြီး ဘယ်လိုနေရမှန်းတောင် မသိပါဘူး” ဟု ပြောင်းရွှေ့ခံရမည့်အထဲတွင် ပါဝင်သူဒေသခံတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 5:37 PM0comments
ထိုင်းလွှတ်တော်ကို ဆန္ဒပြသူများဝိုင်း ထိုင်းအစိုးရသစ် ပေါ်လစီ မကြေညာနိုင်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင်ထောက်ခံသည့် အင်္ကျီအနီဝတ် ဆန္ဒပြသူများက ထိုင်းလွှတ်တော်ရုံးဝင်ပေါက်များကို ၀ိုင်းထားသည့်အတွက် လွှတ်တော်မှာ အစိုးရပေါ်လစီသစ် စတင်ကြေညာမည့်အစီအစဉ်ကို ၀န်ကြီးချုပ် အာဘီဆစ်က ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည်။
ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ အထက်လွှတ်တော်၊ အောက်လွှတ်တော် (၂) ရပ်လုံး စုံညီစွာတက်ရောက်မည့် လွှတ်တော်တွင်
အစိုးရပေါ်လစီသစ် ကြေညာချက်ကို မထုတ်ပြန်မချင်း ထိုင်းအစိုးရသစ်အနေဖြင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိပေ။
သောင်းနှင့်ချီသည့် တပ်ဆင်ထောက်ခံသူများ တနင်္ဂနွေနေ့က ဘန်ကောက်မြို့ ဆနမ်းလွမ် ကွင်းပြင်တွင် စုဝေးပြီး အာဘီဆစ် အစိုးရသစ်အား ဆန္ဒပြပြီးနောက် တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းတွင် အစိုးရသစ်ပေါ်လစီ မကြေညာနိုင်အောင် လွှတ်တော်ကို ၀ိုင်းထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရဆန့်ကျင်သည့် အင်္ကျီအနီဝတ် ဆန္ဒပြသူများကိစ္စကို မစိုးရိမ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာဝပ်က ပြောသော်လည်း လိုအပ်လျှင် ဆန္ဒပြသူများအား လူစုခွဲရန်အတွက် ရဲနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အမှတ် (၁) စစ်တိုင်း တပ်မှူး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာနစ်က ပြောသည်။
၀န်ကြီးချုပ် အာဘီဆစ်က အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူအောင်လုပ်မည့် အစိုးရဖြစ်စေရမည်ဟု ကတိပေးသော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာ ၂၀၀၉ ခုတွင် (၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် (၂) ရာခိုင်နှုန်းကြားသာရှိမည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ကွန်း ချတ်တီကာဗန်းနစ်က မှန်းထားသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 4:03 PM0comments
Posted by Kaw Mu Doh at 2:42 PM0comments
အစ္စရေးလ်က ဒုတိယမြောက်နေ့ လေကြောင်းက ဆက်တိုက်ခိုက်၊ မြေပြင်တပ်များ ပြင်ဆင်နေ
ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်က ဟားမတ်စ် စစ်သွေးကြွ ပစ်မှတ်တွေကို အစ္စရေး စစ်တပ်က ဒုတိယနေ့ အဖြစ် လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး မြေပြင် တပ်ဖွဲ့တွေကလည်း ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဂါဇာ ကမ်းမြှောင် တောင်ပိုင်းက အီဂျစ်နယ်စပ်နဲ့ ဆက်နေတဲ့ ဟားမတ်စ်တွေရဲ့ လက်နက်နဲ့ ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး လမ်းကြောင်း လိုဏ်ဂူတွေကို အစ္စရေး
လေတပ်က တနင်္ဂနွေနေ့က အဓိက ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဂါဇာမြို့ထဲက ဗလီတခုကိုလည်း အစ္စရေး လေယာဉ်တွေက တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး ဒီဗလီဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ခြေတပ် စခန်းဖြစ်တယ်လို့ အစ္စရေးတို့က ဆိုပါတယ်။ အစ္စရေး စစ်တပ်က အရံတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၆၅၀၀ ကိုလည်း ဆင့်ခေါ်ထားပါတယ်။ ၂ရက်ကြာ အစ္စရေးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ပါလက်စတိုင်း ၂၉၀ ကျော် သေဆုံးပြီး အဲဒီအထဲမှာ ဟားမတ်စ် စစ်သွေးကြွ အနဲဆုံး ၁၈၀ ပါတယ်လို့ ဂါဇာက အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်က တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ချက်ခြင်းရပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီက တောင်းဆိုလိုက်ပြီ ပဋိပက္ခတွေကို နိုင်ငံရေး အရ ဖြေရှင်းကြဖို့ အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်းတို့ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဗနဲဒစ် က ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေက တကယ့်အမှန်တရားကို ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ၂ဘက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ပြင်သစ်သမ္မတ ဆာကိုဇီက အခုလို အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ မသင့်လျော်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရန်စ တိုက်ခိုက်မှုတွေက ဂါဇာကမ်းမြှောင်မှာ ပြဿနာတွေကို ကြီးထွားစေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစ္စရေး လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါလက်စတိုင်း ရာပေါင်းများစွာ နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကို ကျော်ပြီး အီဂျစ်ဘက်ကို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကြရာမှာ အ၀င်မခံဘဲ အီဂျစ် လုံခြုံရေးတပ်တွေက သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ် ခြောက်လန့် မောင်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေမှာတော့ အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေက အီဂျစ်၊ အီရက်၊ ဂျော်ဒန်၊ လယ်ဘနွန်၊ စီရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ထောင်နဲ့ ချီပြီး ဟားမတ်စ်တွေအပေါ် အစ္စရေးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
Posted by Kaw Mu Doh at 12:38 PM0comments
ပါကစ္စတန် အသေခံဗုံးခွဲမှု ၃၀ ကျော် သေဆုံး
ဆူပူမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ ပါကစ္စတန် အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့က အသေခံ ကားဗုံးထောင် ဖောက်ခွဲမှု တခု ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ လူပေါင်း ၃၄ ယောက်ထက် မနည်း သေဆုံး ခဲ့ပြီးတော့ ၁၅ဦး ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ပါကစ္စတန် ရဲဘက်တွေက ပြောပါတယ်။ ဖောက်ခွဲမှုကြောင့် စွက်တောင်ကြားအနီး ဘူနဲ မြို့မှာ မဲရုံအဖြစ်နဲ့ အသုံးအဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းတခု ပျက်စီးခဲ့ရသလို အနီးနားက ဈေးဆိုင်အတော်များများလည်း ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ အစိုးရအရာရှိတွေက
ပြောပါတယ်။ ပါကစ္စတန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူတွေ မဲလာပေးနေကြတုန်းမှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ အခုလို တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် အဲဒီ ဒေသ တ၀ိုက် မဲပေးမှုကို ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိတွေက ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ ဆေးရုံ သတင်းတွေအရ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာရသူတွေ အများအပြား ရှိနေတာကြောင့် သေဆုံးမှုဦးရေ တိုးလာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တာလီဘန် စစ်သွေးကြွတွေက အမျိုးသား သုံးဦးကို အမေရိကန်နဲ့ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတို့ရဲ့ သူလျှိုတွေလို့ စွပ်စွဲ ခဲ့ပြီးတော့ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပါကစ္စတန် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ အသတ်ခံရသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို တနင်္ဂနွေနေ့က မြောက်ပိုင်း ၀ါဆီဝစ္စတန် ဒေသမှာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ အစိုးရ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ အလောင်း ၂လောင်းကို မာအလီမြို့ အနီးက တံတားတခုမှာ ကြိုးစွဲချထားတာကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ ကျန်အလောင်း တလောင်းကိုတော့ မီယံရှား မြို့အနီးမှာ သေနတ် ကျည်ဆံရာတွေနဲ့ ရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ အစိုးရ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
Posted by Kaw Mu Doh at 12:35 PM0comments
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၀၈ သတင်းများ
Posted by အာဇာနည် at 12:15 PM0comments
Horror in the East: Burma - The Forgotten War
Horror in the East: Episode 4: Burma - The Forgotten War [Part 1 of 6]
Horror in the East: Episode 4: Burma - The Forgotten War :: [Part2of 6]
Horror in the East: Episode 4: Burma - The Forgotten War :: [Part3of 6]
Horror in the East: Episode 4: Burma - The Forgotten War : [Part4of 6]
Horror in the East: Episode 4: Burma - The Forgotten War [Part5of 6]
Horror in the East: Episode 4: Burma - The Forgotten War :: [Part6of 6]
Posted by အာဇာနည် at 11:47 AM0comments
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှ မြန်မာစစ်တလင်း.
Posted by အာဇာနည် at 11:31 AM0comments
ဂါဇာကမ်းမြှောင်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြဖို့ ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီ တောင်းဆို
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဂါဇာကမ်းမြှောင်မှာ သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်နေတာတွေကို ချက်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ဒီကနေ့ပဲ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံက ဂါဇာမှာ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့လို့ လူပေါင်း ၂၂၅ ယောက်ကျော် သေဆုံးခဲ့ရအပြီး နောက်တနေ့မှာ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ဂါဇာမှာရှိတဲ့ စစ်သွေးကြွတွေက အစ္စရေးလ်ဖက်ကို ရော့ကတ်လောင်ချာတွေ၊ မော်တာတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရက်ပေါင်း အတော်ကြာလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်
အစ္စရေးလ်ဖက်က အခုလို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ အကြောင်းစုံကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Purnell Murdock သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြပေးပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ၄ နာရီကျော်ကြာ အရေးပေါ် ဆွေးနွေးမှုတွေ မနေ့ညပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ အစ္စရေးလ်နဲ့ ဂါဇာမှာရှိတဲ့ ဟာမတ်စ်တို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း အလေးထားဖော်ပြထားတဲ့ ကြေငြာချက်တစောင် ဒီကနေ့ ထွက်လာခဲ့တာပါ။ လက်ရှိလုံခြုံရေးကောင်စီ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး နက်ဗင် ဂျူရီဆာ (Neven Jurica) ကတော့ နှစ်ဖက်စလုံး သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေကို ရပ်ဖို့လည်း တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။
“တည်ငြိမ်မှုတွေ အပြည့်အ၀ ပြန်လည်ရရှိဖို့ လိုတယ်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေက အလေးအနက် ထားကြပါတယ်။ ဒါမှလည်း ပါလက်စတိုင်းနဲ့ အစ္စရေးလ် နှစ်ဖက်အကြား ရှိနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နိုင်ငံရေး အဖြေရှာနိုင်ဖို့ လမ်းစပွင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မနေ့တုန်းကတော့ ဟာမတ်စ် တပ်ဖွဲ့ဝင်သစ်တွေ ကျောင်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပနေတဲ့ နေရာအပါအ၀င် ဂါဇာ ကမ်းမြှောင်မှာရှိတဲ့ စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ လုံခြုံရေး အဆောက်အဦပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို အစ္စရေးလ်က စစ်လေယာဉ်တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။
ဒီကနေ့လည်း လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာ ဂါဇာမြို့မှာရှိတဲ့ ဗလီ ၀တ်ကျောင်းတခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ လူ နောက်ထပ် ၂ ဦးလည်း သေဆုံးခဲ့တာပါ။ အစ္စရေးလ် အစိုးရ တာဝန် ရှိသူတွေကတော့ ဒီ ဗလီဝတ်ကျောင်းဟာ အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အခြေခံ စခန်း တခုအဖြစ် အသုံးပြုနေတဲ့ နေရာတခုလို့ ဆိုပါတယ်။
အစ္စရေးလ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဧဟုဒ် ဘာရက်ခ် (Ehud Barak) ကတော့ ဟာမတ်စတွေကို လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို တိုးမြှင့် တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ သတိပေး ပြောဆိုထားခဲ့သလို၊ မြေပြင် တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် တပ်ဖွဲ့ ရာပေါင်းများစွာကိုလည်း ဂါဇာနယ်စပ် တလျှောက်မှာ အင်အား ဖြည့်ထားပါတယ်။ ဟာမတ်စ်တို့ဘက်ကလည်း တိုက်ခိုက်မှုအတွက် လက်စားချေဖို့ သန္နိဌာန် ချထားတယ်လို့ ပြောဆိုထားတာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကနေ့မှာ အစ္စရေးလ် တောင်ပိုင်းကို ရော့ကတ် လောင်ချာ အလုံး ၅၀ ကျော် ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ လူတဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပါလက်စတိုင်းအရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာနေသူ ရီယာဒ် မန်ဆွာ (Ryad Mansour) ကတော့ လုံခြုံရေး ကောင်စီ အနေနဲ့ အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကြေငြာချက်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ခပ်ရှင်းရှင်း တောင်းဆို လိုက်တာပဲလို့လည်း ဒီကနေ့ပဲ နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“လုံခြုံရေး ကောင်စီက မလုပ်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေရတဲ့နေရာမှာ၊ အခုအခြေအနေမှာ ပထမဆုံး သတင်းစကားတခုအဖြစ် တွေ့ရတာကတော့ ချက်ခြင်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာပဲလို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ချက်ခြင်း လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဂါဇာကမ်းမြှောင်က ပါလက်စတိုင်း လူထုအပေါ် အစ္စရေး စစ်ယန္တယားက အကြီးအကျယ် တရားလက်လွတ် ပြုမူနေတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ဆိုတာပါပဲ။”
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် လုံခြုံရေး ကောင်စီရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို အစ္စရေးလ်ဘက်က လိုက်နာမှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ တခြား အာရပ် နိုင်ငံတွေနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေက လုံခြုံရေးကောင်စီကို ထပ်လာပြီး ဖိအား ပေးကြလိမ့်မယ် ဆိုပြီးတော့လည်း သူက သတိပေး ပြောဆိုပါတယ်။ အစ္စရေးလ်နဲ့ ဟာမတ်စ်တို့အကြား ၆ လကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွေ အခုလ အစောပိုင်းမှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးစဉ်ကစလို့ ၂ ဘက် အကြား တင်းမာမှုတွေ ကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။ အစ္စရေးလ်ဘက်ကို စစ်သွေးကြွတွေက ရော့ကတ် လောင်ချာတွေ၊ မော်တာတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရက်အတော်ကြာလာတဲ့နောက် အခုနောက်ဆုံး အစ္စရေးလ်ဘက်က စီးနင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်း နောက်ဆက်တွဲ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:45 AM0comments
အခြေအနေအဆိုးရွားဆုံး ပြည်သူများတွင် မြန်မာပြည်သူများ ပါ
သတင်းထောက်ကူပြ ( ဓါတ်ပုံ - ဂိုလ်ဂယ်)
ဆိုမာလီယာ၊ ကွန်ဂို၊ ဇင်ဘာဘွေနှင့် မြန်မာနိုင် ငံ များမှ ပြည်သူ များသည် အတိဒုက္ခ ကြုံနေရ ကြောင်း (၂၀၀၈)ခုနှစ်၏ လူသား ဆိုင်ရာ ဘေး ဒုက္ခ အများဆုံး စစ်တမ်းများ တွင် တွေ့ရှိရသည်။ Medicins Sans Fortieres (MSF) ခေါ် နယ်စည်း မခြား ဆရာဝန်များ အသင်း က ကြေငြာ သည့် (၂၀၀၈) ခုနှစ် အဆိုးရွားဆုံး အခြေအ နေ (၁၀) ခုစာရင်းတွင် အဆိုပါ နိုင်ငံများ ပါဝင် နေခဲ့သည်။
MSFက ကြေငြာခဲ့ ရာတွင် ယမန်နှစ် အတွင်း AIDS ရောဂါ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ တီဘီရောဂါကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး တွင် သေဆုံးခဲ့သူ ဦးရေ (၁.၇)သန်းရှိ ကြောင်း ပါရှိသည်။ MSF၏ ကြေငြာချက်အရ ဆိုမာလီယာ တွင် ပြည်သူများသည် လူနေမှု အဆင့်အတန်း အနိမ့်ကျ ဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာမူ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အညံ့ ဖျင်းဆုံး အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင် နေသည်။
ဇင်ဘာဘွေမှာ မူ ရောဂါဘယ ထူပြောများပြား နေပြီး အရှေ့ကွန်ဂိုမှ ပြည်သူများ မှာ ပိတ်မိပြီး ဒုက္ခရောက် နေကြသည်။ ဆူဒန်တွင် အကြမ်းဖက်မှု များ ဖြစ်ပွား နေပြီး အီရတ် ပြည်သူများ၊ အီသီယိုးပီးယား - ဆိုမာလီယာ နယ်စပ်ရှိ ဒေသခံ များမှာ အထောက်အပံ့ များ လိုအပ်လျက် ရှိသည်။ ပါကစ္စတန် မြောက်ပိုင်း ဒေသခံများ မှာ လည်း တိုက်ပွဲများ အတွင်း ကြားညပ် နေကြောင်း သိရှိ ရသည်။ ထို့အပြင် MSF က လူသားများအတွက် ခြိမ်း ခြောက် မှု အများဆုံး ရောဂါကို AIDS နှင့် နောက်ဆက်တွဲ တီဘီဟု အတည်ပြု ခဲ့ပြီး လူသားများ သေဆုံးမှု အများ ဆုံး မှာ အာဟာရချို့တဲ့မှု ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:24 PM0comments
မြန်မာ့ဓာတ်ငွေ့ကို ဒေ၀ူးက တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချမည်
မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရင်းနှီး လုပ်ကိုင်နေသော ဒေ၀ူး အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီကြီး သည် တရုတ် နိုင်ငံသို့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့များ ရောင်းချ ပေးသွားရန် နှစ် (၃၀) သက်တမ်းရှိ သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့သည်။
ဆင်ဟွာသတင်းဌာန၏ ဖော်ပြထားမှု အရ မြန်မာ နိုင်ငံပိုင် A-1 ကမ်းလွန် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ ကုဗပေ
(၄) ထရီလီယမ်မှ (၆) ထရီလီယမ် အထိကို တရုတ်သို့ ရောင်းချရေး ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီက သဘော တူညီမှု ရရှိ ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာ့ ဓာတ်ငွေ့ကို တရုတ်နိုင်ငံ မှ အများအပြား ကုန်သွယ် ၀ယ်ယူလျက် ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနောက် တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းရန် ပြင်ဆင် လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးအတွက် အနောက်အုပ်စု နိုင်ငံများမှ ကုမ္ပဏီကြီးများ က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလွန် နည်းပါးပြီး ဒေ၀ူးကဲ့သို့ မြန်မာ စစ် အစိုးရနှင့် ပလဲနံပသင့် သော ကုမ္ပဏီကြီးများ ကသာ လက်ဝါးကြီးအုပ် ချယ်လှယ် လျက်ရှိသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:22 PM0comments
ခရစ်စမတ်အပြန် ရှမ်းလူငယ်ကို ရဲနှင့်ပြည်သူ့စစ်တို့ရိုက်သတ်
စနေနေ့၊ 27 ဒီဇင်ဘာလ 2008 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ရှမ်းပြည်(မြောက်ပိုင်း) နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့ညပိုင်းက ခရစ်စမတ်ပွဲမှပြန်လာသူ ရှမ်းအမျိုးသားလူငယ်တစ်ဦးအား ရဲနှင့်ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်သဖြင့် သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့ နောင်ခမ်းတိုက်ရွာသား အသက်(၂၂)အရွယ် စိုင်းတီးနှင့်အဖေါ်ကောင်မလေးတို့ နှစ်ဦး
ဆိုင်ကယ်စီး၍ခရစ်စမတ်ပွဲမှပြန်လာစဉ် ကင်းလှည့်နေသည့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား အားဆိုင်ကယ်နှင့်ပွတ်တိုက်မိရာမှ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြသဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်ဒေသခံကသျမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောသည်။
၄င်းနေ့ညက ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ဦးလောဆန်ခေါင်းဆောင်သည့် မြို့မပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များက ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကြပြီး စိုင်းတီးအား နမ့်ခမ်းဆေးရုံသို့ လက်ထိတ်ခတ် ခေါ်ဆောင်သွားကြကာ ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်များအားဆေးကုသခွင့်မပြုခိုင်းပဲ ကုတင်တွင် လက်ထိပ်ခတ်၍ ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(နောင်ခမ်းတိုက်ရွာသား စိုင်းတီး အဖေက ဦးမောက်ဆိုင် အမေက ဒေါ်မိုင်ခမ်းရွေကြာ သူနဲ့ နမ့်ခမ်းဟိုကတ်ရပ်ကွက်က ကောင်မလေး နန်းဆိုင်ခမ်း အဖေကဦးမောင်အိုက်ကို အမေကဒေါ်မြစိန် သူတို့နှစ်ယောက်က ခရစ်စမတ်ပွဲ သွားပြီးအပြန် ပါဝါဓါတ်ဆီဆိုင်နားမှာ ရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်ကင်းလှည့်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ် သူတို့အထဲက ပြည်သူ့စစ်တစ်ယောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပွတ်တိုက်မိလိုက်တော့ ၀ိုင်းရိုက်ကြလို့ ရွေလီဆေးရုံမှာ သေသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
“နမ့်ခမ်းဆေးရုံကိုရောက်တာတောင် ဆရာဝန်ကိုဆေးမကုခိုင်းဘူး ဒီအတိုင်းကုတင်မှာလက်ထိပ်ခတ်ထားတယ် မိဘတွေက သိလို့လိုက် သွားပြီး နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှူးကိုအာမခံမှ မနက်ပိုင်းမှ ရွေလီဆေးရုံ ယူသွားကြတယ်ပေါ့ ၂၄ရက်နေ့ည ၁၁နာရီမှာ ရွေလီ ဆေးရုံမှာဆုံး သွားတယ် အလောင်းကိုရွာပြန်ယူသွားပြီး ဒီနေ့သဂြိုလ်တယ် ”လို့အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည် ။
စိုင်းတီးစီးနှင်းခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်တရုတ်ယွမ်ငွေ(၃၀၀)ကိုလည်း ရဲစခန်းကသိမ်းယူထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှု့ကို မိသားစုက နမ့်ခမ်းရဲစခန်းတွင်တိုင်ချက်ဖွင့်ထားကြောင်း ပြောပြသည်။၄င်းအပြင်စိုင်းတီးစီးနှင်းခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်တရုတ်ယွမ်ငွေ(၃၀၀)ကိုလည်း ရဲစခန်းကသိမ်းယူထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:11 PM0comments
စစ်တပ်မှဖယ်ရှားအနားယူသွားပြီဟု သတင်းထွက်ခဲ့သော ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာ
နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန် စစ်အစိုးရ၏ လေးလပတ်အစည်းအဝေးအပြီး တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်းတာဝန်များယူထားသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၅) ဦးအနက် (၄) ဦးမှာ ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာသည်။
စစ်ရေးအကဲခတ်သူများအကြား အဆိုပါ (၅) ဦးအား အငြိမ်းစားပေးလိုက်ပြီဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီး (၅) လအကြာ
၎င်းတို့လှုပ်ရှားမှုများ ပျောက်ကွယ်နေပြီးနောက် (၄) ဦး၏ လှုပ်ရှားမှု စတင်ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
"တပ်ထဲမှာလည်း မေးစရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်၊ တကယ်စာရင်းထွက်လာခဲ့ကတည်းက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်သန်းကို ကျန်းမာရေးအရ အနားပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ (၄) ယောက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တွဲဘက်ဆိုပြီး ထွက်ခဲ့တာပါ" ဟု ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှ တပ်မတော်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
သားဖြစ်သူမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုဖြင့် အကျဉ်းရုံးစစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးနောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် မောင်ဝိတ်အား စစ်အစိုးရက မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ရာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကိုလည်း အနားပေးလိုက်သည်ဟု တပ်တွင်း ပြန့်နှံ့နေခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ်မှာ အရေးယူခြင်းမရှိဟု အဆိုပါအရာရှိက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းအပတ်စဉ် (၁၀) သင်တန်းဆင်းပွဲကို ယမန်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးများဖြစ်ပြီး အနားယူသွားပြီဟု အများသုံးသပ်နေသော ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘို၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဝင်းနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ထွေးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
"ကျနော်သုံးသပ်တာတော့ လွှတ်တော်မှာ တပ်မတော်ကကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလို့ သတ်မှတ်ထားတာမို့ သူတို့က အလိုလို အဲ့ဒီနေရာကို ဝင်လာပါလိမ့်မယ်၊ တပ်ချုပ်က သူ့ကို ရာသက်ပန်ကာကွယ်ပေးမဲ့သူတွေ လိုအပ်နေတာမဟုတ်လား"ဟု အဆိုပါ တပ်မတော်အရာရှိက ဆက်လက်ပြောဆိုသွားသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:10 PM0comments
ရန်ကုန် DPA သတင်းထောက် မမှန်သတင်းရေးဟု အန်အယ်ဒီ ဦးဝင်းတင် စွပ်စွဲ
မင်းနိုင်သူ/ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈
အန်အယ်ဒီပါတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုသည့်အပိုင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်လိုသည့်အပိုင်း (၂) ပိုင်းကွဲ နေကြောင်း အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်ကို ကိုးကား၍ ရန်ကုန် DPA (Deutsche Presse-Agentur GmbH) နိုင်ငံခြား သတင်းထောက် ရေးသားခဲ့သည့်သတင်း မှားယွင်းနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် စာတစောင်ကို ဦးဝင်းတင်က ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းသို့ ဒီဇင်ဘာ (၁၀) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ပေးပို့ထားသည်။
နိုဝင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဒီပီအေ သတင်း၌ အထက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လိမ်လည်လုပ်ကြံရေးသား သည့်သတင်းမှားအတွက် အရေးယူပေးရန် ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များအသင်း အတွင်းရေးမှူးသို့ လိပ်မူပြီး အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင် က ရေးသားပေးပို့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒီပီအေသတင်းကို ကိုးကား၍ စစ်အစိုးရအလိုကျ အတိုက်အခံသတင်းများအား မမှန်မကန်ဖော်ပြနေသည့် ပြည်တွင်းဝဂ်ဆိုက်တခုဖြစ် သည့် သာကီနွယ် အင်တာနက်သတင်းဌာနကပါ ဦးဝင်းတင်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုသည့်ဆန္ဒရှိသယောင် အန်အယ်ဒီအတွင်း အကွဲ အပြဲများ ပေါ်ပေါက်နေသယောင် ရေးထားသည့်အတွက် ဒီပီအေ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနနှင့် သာကီနွယ် အင်တာနက်သတင်းတို့ ပူးပေါင်း လိမ်လည် လုပ်ကြံဖန်တီးချက်ကို အရေးယူပေးရန် ဦးဝင်းတင်၏ စာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဒီပီအေ သတင်းဌာနသည် ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ်တွင် အခြေစိုက်သည့် သိက္ခာရှိ သတင်းဌာနကြီး တခုဖြစ်သော်လည်း လောလော ဆယ် ဒီပီအေ ရန်ကုန် သတင်းထောက်မှာ စစ်အစိုးရအလိုကျ ရေးသားနေ သည့် စာနယ်ဇင်းသမားတဦးဟု ရန်ကုန် စာနယ်ဇင်းလောက မှာ လူသိများသည့် ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ဆိုသူ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် တဦးက ပြောသည်။
ဒီပီအေ ရန်ကုန် သတင်းထောက်ကို တာဝန်ခံသည့် ဒီပီအေ အယ်ဒီတာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ ရုံးထိုင် သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာ အတိုက်အခံများက ဦးဝင်းတင်၏စာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆို၍ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ DPA သတင်းဌာနခွဲရုံး အယ်ဒီတာထံ သို့ bangkok@dpa.com အီးမေးဖြင့် ဆက်လက် ပေးပို့ ကန့်ကွက် သင့်ကြောင်း ရန်ကုန် နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကလည်း ယူဆသည်။
အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းတင်၏ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက် ၄ ရပ်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ကြောင်းပါ အဆိုပါ စာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
၁။ စစ်အစိုးရ၏ အမျိုးသားညီလာခံကို ဆန့်ကျင်သည်။
၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးရေး၊ ၁၉၉၀ လွှတ်တော် ခေါ်ရေး နှင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုသည့် စု-လွှတ်-တွေ့ လမ်းစဉ်ကို ကိုင်စွဲသည်။
၃။ စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံ။
၄။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြု
ဦးဝင်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းသို့ ပေးပို့်ခဲ့သည့် မူရင်း စာအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Posted by အာဇာနည် at 7:09 PM0comments
ပလီပေါက် ကင်းနေဗီ (ရေတပ်) လူထုထံမှ ဓါးပြတိုက်
လှမြတ်သူ (မိဇံ) ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် ပလီပေါက်တွင် ရေကြောင်းကင်း တာဝန် အနေဖြင့် မြစ်ကြောင်း တိုက်ရေယဉ် ရေတပ် စစ်သင်္ဘောငယ် တစီးအား အစောင့်ချထားပါသည်။
ထိုသို့ နေဗီတစီးအား သက်ဆိုင်ရာ အထက်မှ အစောင့်ချထားသဖြင့် ဒေသအတွင်း ခရီးသွားလာသူများ အနေဖြင့် သူခိုး ဓါးပြရန်ကို စိုးရိမ်စရာ မလိုဘဲ ခရီးသွားလာနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
သို့သော်လည်း အဆိုပါ သင်္ဘောပေါ်ရှိ ရေတပ်သားများမှာ ဒေသအတွင်း ယခင်က ကျင်လည် ကျက်စားခဲ့သော ဓါးပြများကဲ့သို့
လူထုထံမှ သွေးအေး ဓါးပြတိုက်နေသဖြင့် ခရီးသွားပြည်သူများမှာ အထူး ဒုက္ခရောက်နေကြရပါသည်။
အဆိုပါ ရေတပ်သားများသည် ကုလားတန် မြစ်ကြောင်း တလျောက် သွားလာနေသော မည်သည့် လောင်း သဗ္ဗာန် စက်လှေ ဘုတ်ကို မဆို ပလီပေါက်နှင့် တန်ခိုးချောင်းပေါက်ကနေ စောင့်ဆိုင်းပြီး ရပ်တန့်ခိုင်းကာ ငွေကောက်ခံနေပါသည်။
တရားဝင် အစိုးရပါမိတ်များဖြင့်် သွားလာနေသော ဆန်၊ သစ်၊ ၀ါး၊ သစ်သီးဝလံများ တင်ဆောင်လာသော ရေယဉ်များနှင့် ငါးဖမ်းစက်လှေများမှလည်း ငွေကောက်ခံပါသည်။ မပေးလျှင် ဖြတ်သန်းသွာလာခြင်း မပြုပါ၊ ငွေမပေးနိုင်သော ရေယဉ်များကို အချိန်ကြာမြှင့်စွာ ဆိပ်ကပ်ပြီး ခရီးသွား လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသူများကို အချိန် ကြန့်ကြာအောင် ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြောင်းကို မှီင်္ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူများမှာ ဒီရေ (ဖြားရီ) အတက်အကျကို လိုက်ပြီး ခရီးသွားလာနေကြသဖြင့် အချိန်မမှီမည်ကို စိုးရိမ်၍ ရေတပ်သားများမှ တောင်းသို့ငွေကို ပေးနေကြရပါသည်။
စစ်တွေ အခြေစိုက် အမှတ် (၁၈) ရေတပ် လက်အောက်ခံ ပလီပေါက် ရေတပ်ကင်းစခန်းမှာ ယခုကဲ့သို့ လာလာသမျှ ရေယဉ်များမှ ငွေကောက်ခံနေသဖြင့် အထူးဝင်ငွေကောင်းသော စခန်း တခုဖြစ်နေပြီး အဆိုပါ စခန်းတွင် တာဝန်ကျလိုသော ရေတပ်သား တဦးအနေဖြင့် ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းထိ အထက်အရာရှိကို လာဒ်ပေးရသည်ဟုလည်း သိရပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးကာကွယ်နေပါသည်ဟု ပြောဆိုနေသော နအဖ ရေတပ်သားများမှ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ပြည်သူများထံမှ ငွေများ မတရား ကောက်ခံနေသဖြင့် ရခိုင်ပြည်သူလူထုမှာ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နေကြရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:07 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 7:06 PM0comments
မောင်တောတွင် ရခိုင် အမျိုးသား တဦး အသတ်ခံရပြန်ပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် နယ်စပ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် လူသူမနီး တောထဲ တောင်ထဲတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူ ရခိုင်များကို အမည်မသိသူများက ရှင်းပစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယမန်နေ့က မောင်တော ၄ မိုင် ကမ်းသာယာ ကျေးရွာမှ နွားအဌား ကျောင်းနေသူ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် လူကြီး တဦးကို
အမည်မသိ တစုက အသေသတ်ပြီး ဂုံနီအိတ်တွင် ထည့်ကာ လွင့်ပစ်ထားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သေဆုံးသွားသူမှာ ဦးအောင်ထွီးဖြစ်ပြီး သူအား လက်နှင့် ခြေထောက်ကို ချည်နှောင်ကာ မျက်နာကို ပလစတစ် အိတ်ဖြင့် ချုပ်နှောင်ပြီး သတ်ပစ်ခဲ့သည်ဟု ၄မိုင် ကမ်းသာယာ ကျေးရွာသား တဦးမှ ပြောသည်။
သူ၏ အလောင်းအား ယမန်နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် နွားကျောင်းရာ တောအုပ် တခု အနီးမှ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ညနေ ၇နာရီတွင် မောင်တောရဲက အလောင်းကို လာရောက်ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အလားတူ မောင်တောမြို့ ဝေသာလီ ရပ်ကွက်မှ ဦးမောင်လူ၏ ဇနီး ဒေါ်အောင်သာမေ (၅၀ နှစ်) ကို နိုဝင်္ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က လူတစုမှ ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်သွားခဲ့သဖြင့် ပွဲချင်းပီး သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း မောင်တော နစက နှင့်ရဲက ယခုအချိန်ထိ အဆိုပါ အမူကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြစ်မူကြီးများအား ကျူးလွန်နေသူ တရားခံများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးခြင်းမှာ မောင်တောမြို့နယ်တွင် တာဝန်ကျနေသော နစကနှင့် ရဲအရာရှိများမှာ ငွေကြေး မရလျှင် မည်သည့် အမူကိုမှ စိတ်ပါလက်ပါ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ၍ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းအပြင် ဒေသဆိုင်ရာ နစက၊ စရဖ ၊ လုံထိန်းနှင့် ရဲအရာရှိများမှာ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများမှ ငွေကြေးများ ရရှိနေပြီး ငွေရလျှင် ဒုစရိုက်သမားများ ကျူးလွန်သော တချို့အမူများကို လုံးဝ လစ်လျူရှုထားသည်ဟု သိရသည်။ သို့အတွက် ဒုစရိုက်သမားများမှာ မောင်တော နယ်စပ် တလျောက်တွင် အထူးသောင်းကျန်းနေသည်ဟု သိရသည်။
ယခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်း မောင်တောမြို့နယ်တွင် လူသတ်မူများ တိုးပွားလာနေသဖြင့် သာမန် တောလက်ကျေးရွာနေ ပြည်သူများမှာ တောတောင်ထဲသို့ တဦးစ နှစ်ဦးစ မသွားရဲဘဲ ဖြစ်နေသည်ဟု သ်ိရသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:06 PM0comments
ငွေမျက်နာကြောင့် တရားလိုက တရားခံဖြစ်
လှမြတ်သူ (မိဇံ) ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ စက်ရုံစု ရပ်ကွက် နာဇီကျေးရွာအတွင်း ငါးခြောက်ရောင်းနေသော ဦးမောင်မျှအား မူဆလင် ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးက ၀ိုင်းရိုက်ခဲ့သော မူခင်း တခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရိုက်ပွဲကို အနီးအနားမှ ရခိုင်များက ၀င်ရောက် ဖျဉ်ဖြေသဖြင့် ရန်ပွဲမှာ ပြီးစီးသွားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အရိုက်ခံရသူ ဦးမောင်မျှက တခြားသက်သေ နှစ်ဦးနှင့် အတူ နယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် တိုင်ကြားရန် သွားရောက်စဉ်
ဒေသအာဏာပိုင် ထောက်လှမ်းရေး စစ်တပ်များဖြင့် ပူးပေါင်းပြီး အဆိုပါ ရပ်ကွက်အတွင်း ဗိုလ်ကျနေသူ အီဆတ်နှင့် အာလီဆိုသူက နောက်ကလိုက်လာပြီး ရခိုင်တွေ ကုလားတွေကို ချနေပြီဟု အော်လိုက်သဖြင့် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ မူဆလင်ဘာသာဝင် ၁၀၀ ခန့်ထွက်လာပြီး ဦးမောင်မျှနှင့် သက်သေ အဖြစ် လိုက်ပါသူ နှစ်ဦးကို ၀ိုင်းရိုက်ကြသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ သတင်းကြောင့် နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့က အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ချက်ချင်း ရောက်ရှိလာပြီး ရန်ပွဲကို လူစုခွဲခဲ့ပါသည်။
နယ်မြေရဲက အီဆတ်ဆိုသူကို ဖမ်းဆီးရရှိမိပြီး အာလီမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြှောက်သွားခဲ့ပါသည်။
ချက်ချင်းဆိုသလို ပြည်နယ် ရဲမှူးကြီးနှင့် မြို့နယ် ရဲမှူးတို့ ရောက်ရှိလာပြီး သူတို့နှင့် အတူ အီဆတ်၏ ယောက်ဖ တော်စပ်သူ တော်လိမ်း (ခေါ်) ဦးခင်မောင်လှလည်း အတူ လိုက်ပါလာပြီး အရိုက်ခံသူ ဦးမောင်မျှနှင့် သက်သေ အဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူ (၂)ဦးပါ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။
ဦးခင်မောင်လှမှာ ချမ်းသာသော စီးပွားရေး သမား တဦးဖြစ်ပြီး စစ်တွေမြို့ရှိ အရာရှိကြီးများ အားလုံးကို အိတ်ထဲတွင် ထည့်ထားနိုင်သူ ဖြစ်ပါသည်။
ဦးခင်မောင်လှမှာ ထိုကဲ့သို့ စစ်တွေမြို့မှ အရာရှိကြီးများကို အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားနိုင်သဖြင့် ပြည်သူ လုပ်အားဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော စစ်တွေ အောင်ဒိုင် ပုဇွန်ကန်၊ စစ်တွေ သားသတ်လိုင်စင်၊ နာဇီရွာ ဈေးနှင့် နွားမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ အပါအ၀င် တခြား လုပ်ငန်းများကိုပါ ကန်ထရိုက်ရထားသူ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ကန်ထရိုက် ရထားသဖြင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စစ်တွေမြို့နယ် စည်ပင် ဦးစီးမှူး ကားအပြာလေးဖြင့် ပြည်နယ်ရဲမှူး၊ ခရိုင် ဥက္ကဌ၊ မယက ဥက္ကဌ၊ မြို့နယ် စည်ပင်ဦးစီးမှူး အိမ်များ အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီး အိမ်များသို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နွားသားများကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးလေ့ရှိပါသည်။
သို့အတွက် ဦးခင်မောင်လှမှာ စစ်တွေရှိ အရာရှိများ အကြားတွင် သြဇာ အာဏာကြီးမားသူ တဦးဖြစ်နေပြီး ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးမှာလည်း အဆိုပါ ဦးခင်မောင်လှ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ ဦးမောင်မျှနှင့် သက်သေ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးမောင်မျှ၏ ဆွေမျိုးတော်သူ တဦးကပြောသည်။
ဦးမောင်မျှနှင့် သက်သေ အဖြစ် လိုက်ပါသူ နှစ်ဦးကို နောက်ပိုင်းတွင် သတိပေးပြီး ပြန်လွတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ရဲအဖွဲ့က တရားစွဲဆိုရန် ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အလားတူ အီဆတ်ကိုလည်း နောက်ပိုင်းတွင် ရဲအဖွဲ့ ငွေယူပြီ်း လွတ်ပေးလိုက်ပါသည်။
Posted by Kaw Mu Doh at 7:05 PM0comments
► 2011 (2374)
▼ 2008 (3221)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ညီညွတ်ကြရန် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းချုပ် ဆ...
အချိန်မရှိတော့ဘူး လုပ်လိုက်ပါတော့တဲ့ ကျော်ဟိန်းကေ...
ဒုတိယမြောက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ နှင့် အနီးကပ်ဆုံးရန်...
လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာ အကျဉ်းသား ၁၀၅ ဦး ကော့ဘဇားထောင်တွ...
ပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးတဲ့ ခွေးသူတောင်းစာ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များရဲ့ အ...
အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်အချို့ မြေနီကုန်းမှာ ဆန္ဒပြလမ်းလျှော...
stilwell road (သို့ )Burma Road (သို့ )လီဒိုလမ်းမ ...
မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီပေးရေး ဂမ်ဘာရ...
ပါလက်စတိုင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြန်ထိန်းကြဖို့ ဘန်က...
သူထက်ချော.သူ့ ထက်တော် သူထက် လူတွေချစ် လို့ခွေးအြ...
နားဂစ်မုန်တိုင်းရံပုံငွေနာမည်ဖြင့် ကညနတို့ ဆိုင်က...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာ ၃၀၀ကျော် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်မ...
သုံးရက် ဆက်တိုက် အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ ပါလက...
Global Action for Burma : Second Struggle for Nati...
ဘီဘီစီ ဘန်ကောက် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် ထိုင်းဘုရင်အ...
ပြည်ပဆန်တင်ပို့မှု အရှုံးပေါ် နိုင်ငံခြားဆန်ရောင်းသူမ...
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမှာ ဘူတာသစ် ထပ်တည်မည် အိမ်ခြေ (...
ထိုင်းလွှတ်တော်ကို ဆန္ဒပြသူများဝိုင်း ထိုင်းအစိုးရသစ...
အစ္စရေးလ်က ဒုတိယမြောက်နေ့ လေကြောင်းက ဆက်တိုက်ခိုက်၊...
ဂါဇာကမ်းမြှောင်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြဖို့ ကုလ လုံခြုံ...
အခြေအနေအဆိုးရွားဆုံး ပြည်သူများတွင် မြန်မာပြည်သူမျ...
မြန်မာ့ဓာတ်ငွေ့ကို ဒေ၀ူးက တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းခ...
စစ်တပ်မှဖယ်ရှားအနားယူသွားပြီဟု သတင်းထွက်ခဲ့သော ထိပ...
ရန်ကုန် DPA သတင်းထောက် မမှန်သတင်းရေးဟု အန်အယ်ဒီ ဦ...
Ashin Ottama's Birthday Anniversary 129 years on 2...
European Commission sends aid to Myanmar
ကြည့်လှည့်သင့်တဲ့ ခြင်္သေ့ လည်ပြန်
ဂျပန်လူမျိုးဦးရွှေဘ Interview of U SHWE BA(Mr.TaNa...
အိန္ဒိယနယ်စပ် ပါကစ္စတန် စစ်အင်အားဖြည့်
HIV/ AIDS ဝေဒနာသည်များကို စောင့်ရှောက်သူတို့ ကြပ်တ...
အလုပ်သမ လေးဦး နစ်နာကြေး ရရှိ
ယာယီသက်တမ်းလွန်ကားများ သိမ်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းမှူး ည...
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ကို ဗဟိုပြု၍ ငလျင်လှုပ်၊ (၉) ဦးထ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ရေပိုက်နက် အငြင်...
ဆူနာမီ လေးနှစ် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ...
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ထိုင်းအစိုးရသစ် ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ...
ဘိုကလေးမြို့နယ် ကျေးရွာစုစည်း စီမံကိန်းကြောင့် ရွ...
ဂီနီဝန်ကြီးချုပ် အာဏာသိမ်းစစ်ဗိုလ်ထံ အညံ့ခံလိုက်ပြ...
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ခရစ္စမတ် မိန့်ခွန်းမ...
၂၇. ၁၂ .၂၀၀၈ ကရင်နှစ်သစ်ကူး အတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည...
RCSS/SSA ဌာနချုပ်၌ သျှမ်းပြည်ကွန်ဂရက် ဖွဲ့စည်းတည်ေ...
နယ်စပ်၌ နအဖစစ်အင်အားတိုးချဲ့ ၀တပ်ဖွဲ့နှင့် အပြိုင်...
အနော်တော့ ကြောက်တယ်ဗျ။ လိမ်ရတာလည်း မျက်နှာပူလှပေါ့...
ပဲခူးထောင်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး သတ်သေမှုဖြစ်...
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ၂၀၀၈ သတင်းများ။
မေ့မရသော ဆရာ့ အမှာစကား
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့ နျူကလီးယား လက်နက် သုံးနိုင် ...
မူဆယ်တွင် လုယက်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေ
မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည်အမှတ်တရ နှစ် ၂၀
နအဖ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရဲ့ ထိုးဖောက်မှုအစီအစဉ်
စေတနာရှင်များ ၀ိုင်းကူမှ ပညာတတ်မဲ့ မြန်မာကလေးငယ်မျ...
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ၂၀၀၈ သတင်းများ။
၆၁ နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖိတ်ကြားခြင်း
နအဖ၂၀၁၀ မှ ဘယ်လိုကလိမ်ကကျစ်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေတယ် ကျ...
မြေး ရှုဖို့အတွက် အဖိုးကဘိန်း စိုက်ခိုင်းတာ ဖြစ်မယ...
ဒါမျိုးမှ ဆိုးပေ သန်းရွှေ က အားရကျေနပ်တာ
မဲဆောက်နေ တော်လှန်ရေးသမားများ သတိ
၃၇၆ ဆို တာ ကြား ကတည်း ကျက်သရေ တော်တော် ယုတ်နေပြီ
လှေစီး၍ မလေးရှားသို့ အလုပ်ရှာဖွေရန် သွားသူ ၁၀၇ ဦး...
တရုတ်ဘက်သို့ လူကုန်ကူးသူတဦး ဖမ်းဆီးခံရ